ARCADIA BIM - Altermativa Revit
Mee, 2018 dhowr
[cinwaanka bogga soo socda = »ArCADia 10 ″]
Miyaan u baahanahay farsamooyinka BIM ee maalmahan?
Ereyga Dhismaha Macluumaadka Dhismaha (BIM), sida lagu qeexay Wikipedia, waa qaabaynta macluumaadka dhismaha iyo dhismayaasha. Inkasta oo ereyadani ay noqotey mid aad u caadi ah, dad badani weli ma fahmin fikraddan si aad u wanaagsan sababtoo ah fasiraadyadooda iyo sharraxaadkooda aad ayay u kala duwan yihiin. Qaar waxay aaminsanyihiin in ay tahay fikrad farsamo oo ka caawisa naqshada. Qaar kalena waxay u maleynayaan in ay tahay qaabka dhismaha ee lagu abuuray adduunka ku dhisan. Qeexida sida caadiga ah loo isticmaalo ayaa ah in macluumaadka xogta dhismaha lagu kaydiyo. noo, ugu dhow runta, fikradda waa qeexidda xilli oo ah geedi socod taas oo kaalinta ugu muhiimsan waxaa lagu ciyaaray by iskaashiga iyo isgaarsiinta ka mid ah ka qaybgalayaasha. Nidaamkani wuxuu ku lug leeyahay naqshadeynta iyo dhismaha dhisme ama qaab dhismeed, ka dibna maamulkiisa iyo dayactirka illaa iyo inta uu ka dhacayo. Waxay ku salaysan tahay abuurista dhamaystiran oo ah dhammaystiran, hannaan, "nool" qaab dhismeedka kaas oo dhamaan kaqeybgaleyaashu ay isku midka yihiin iyaga oo ku daraya walxaha isku xigxiga ee maktabadda macluumaadka. Lammaanayaashoodu badanaa waxay yihiin: maalgashadayaasha, dhistayaasha, dhisayaasha iyo rakibayaasha, qandaraaslaha iyo maamulaha dhismaha. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in ay xoogga saaraan in nuxurka dhabta ah ee BIM waa si ay u qaabeeyaan dhismaha oo dhan halkii u isticmaalaya in industry hal, xitaa haddii ay ahaayeen habka naqshad industry-keentay.
Markaan la hadlo macaamiishayada, waxaynu ku aragnaa aragtiyo kala duwan oo ku saabsan shaqada naqshadeeye. Inta badan waxaan maqli, "sababta waqti aan qaaliga ah ee qaar ka mid ah cibaaro farsamo, sababtoo ah ilaa hadda la ii maareeyo si fiican in la dhigaayo mashruuc sida sawirka CAD ah, ma model dhismaha ee technology BIM a ? »Si joogta ah ilaa hadda. Malaha labaatan sano, injineero ayaa sheegay in ay isku mid, ku tiirsan guddiga sawir iyo doubtfully eegay ay asxaabta fadhiya hore ee computer screens barnaamijka CAD ah rakibay, aan aad u dareen leh oo adag, taas oo abuuri stroke qaar ka mid ah loo baahan yahay aqoon badan iyo waqti badan. Labaatan sano ka hor, computer ku guuleystay guddiga barbaro ay sabab u tahay xaqiiqada ah in waqtigan bixisay saami naqshadeeye markii uu ka yimid si edit sawir ama nuqul in nuqulada ku xiga. Maanta dadku waxay u arkaan in kombuyuutarku uu yahay wax caddaynaya shaqada dhismaha ama injineernimada. Haddii aan sameeyo ma aan ka hor tagno oo ku sii dhaca ha dhawaado ama ha ogaado in farsamooyinka cusub ee tareenka si deg deg ah si ay ula qabsadaan oo u socota. Maanta ma jiro qof ka fekeraya samaynta sawirro CAD ah oo ku saabsan guddi sawir. Naqshadayaashu waxay u adeegsadeen software-ka casriga ah ee leh interface fudud oo dhexdhexaad ah kaas oo horay u yaqaanay isticmaalaha kombuyuutarrada caadiga ah iyo sida ay caadooyinka aysan ku xirneyn oo keliya khuseeya software CAD
Tusaala wanaagsan ee tani waa shirkadaha ArCADia BIM System, oo ka kooban barnaamijyo loogu talagalay warshadaha naqshadeynta kala duwan. Iyadoo ay suurtagal tahay in la isku qabsado si sahlan oo loo isticmaalo habdhaqanka sare ee nidaamka, iyo, shaki la'aan, dadka isticmaala maaha inay waqti badan ku qaataan barashada software cusub oo isticmaala tiknoolijiyada BIM. Fekerkayaga ku saabsan fursadaha iyo faa'iidooyinka tiknoolajiyadda BIM, waxaanu xooga saarnaa iskaashiga ka dhexeeya naqshadaha ka socda warshado kala duwan. Waxaan aaminsanahay in xiriirka saxda ah ee u dhaxeeya iyaga iyo isfahamka isdhaafsiga baahiyahooda uu yahay furaha guusha mustaqbalka habka cusub ee naqshadeynta. Farsameynta naqshadeynta hadda waxay keenaysaa cillado badan oo naqshad ahaan ah sida muuqaalka iyo muuqaalka muuqaallada aan la filayn oo ka muuqda goobta dhismaha oo kaliya, iyo natiijada kharashka maalgashaduna waxay kordhayaan marxaladdiisa ugu dambeysa.
Ka mid ah samaynta waxaa ku Xukuntay in hirgelinta design BIM ah waa qaali, iyo in isticmaalka BIM by xidhaba iyo waxdhisayaashii saameeyaa aan loo baahnayn iyo si xun u sabab ah qiimaha mashruuca waxaa laga yaabaa in Maal uu dooranayo xal dhaqanka jaban . Wax walbaa laga yaabo inay ka soo baxaan runta. Iyadoo la tixgelinayo maalgashi caalami ah, faa'iidooyinka dhaqaale ahaan doonaa cajiib ah iyo hawsha naqshadeeye ee waa (ama waa in) si uu uga dhaadhiciyo Maal ku go'aansan iyo la'aataan. Waad ku mahadsan tahay xalalka BIM-ku salaysan, waxaad heli doontaa mashruuc oo ah qaab buuxa oo cad oo 3D ah. Tani waxaa ku jiri doona macluumaad buuxa oo ay bixiyaan update ah on kasta oo ka mid ah qaybaha dhismaha, kharashka volumetrics, qalabka, tas-hiilaadka, wax isticmaalka iyo dhismaha, taas oo ku xidhan isbedelka dhigay inta lagu guda jiro design iyo hirgelinta mashruuca. Thanks to this model, waxaan si fudud ula socon kartaa saameynta isbedelka kharashka kama dambaysta ah.
3D model dhismaha siinayaa naqshadeeye awood u leh inay si sax ah loo hubiyo si faahfaahsan kasta, iyo xaqiiqda ah in barnaamijka ogol yahay qalad qabashada iyo shilalka, dhibaatada ka iman karta dhismaha kasta waa laga saarayaa yada design ah, ie ka hor taas oo u muuqata, wakhtiga iyo lacagta lagu badbaadinayo. Faa'iidooyinka dhaqaale ee la qiyaasi karo ayaa sugaya marxaladda hawlgalka dhismaha. Furaha guusha ma aha sidaas u badan software laftiisa, laakiin macluumaadka aad rido inta lagu guda jiro design, dhismaha iyo marka la dhameystiro, oggolaanayo in aad si wax ku ool u maareeyaan dhismaha iyo in la yareeyo kharashka ku baxa waxaa dayactirka si inta lagu jiro wareegga noloshiisa.
Nidaamka ArCADia BIM wuxuu tixgeliyaa dhammaan qaybaha mashruuca dhismaha waxaana ka mid ah qalab kasta oo warshad kasta oo naqshadeynta ah oo ka kooban mihnad, tuubo, gaas, isgaadhsiin iyo qalabka korontada si loo helo hantidhawrka tamarta. Barnaamijka Arcton BIM wuxuu heli karaa qof walba. Waxaa muhiim ah in wax laga beddelo barnaamijka iyo habka uu u haysto ruqsad iyo waliba tiknoolajiyada aan loo isticmaalin in ay xaddiddo naqshadaha sameynta diyaarinta iyo gudbinta naqshadeynta iyo sawirrada kaqaybgalayaasha kale ee geedi socodka. Iyadoo aan loo eegin shaqeynta ArCADia BIM, dhammaan naqshadeeyayaasha waxay heli karaan xogta dhamaystiran ee qaabka dhismaha, waxayna sidoo kale u gudbin kartaa ama u dhoofin kartaa naqshadaynta codsiyada saddexaad ee loo isticmaalo.
Waa maxay arCADIA 10?
ArCADIA waa barnaamij taageera 2D iyo 3D. Iyadoo ay jirto falsafad farsameed iyo qaab isku mid ah oo lagu kaydinayo xogta (DWG), waxay aad u la mid tahay barnaamijka AutoCAD.
Qalabka aasaasiga ah ee nidaamka Ariiga BIM
• Qalabkan ArCADia wuxuu u ogolaanayaa inuu isticmaalo inuu isbarbardhigo naqshadaha abuuray nidaamka Arcton BIM iyo helitaanka faraqa u dhexeeya iyaga.
• Qalabkani wuxuu u oggol yahay inuu ku daro naqshado dhowr ah oo dhowr qalab oo hal dukumeenti ah.
Maamulida sawirka dhismaha:
• Waxay u saamaxdaa maamulka ra'yiga iyo macluumaadka la soo bandhigay iyadoo la isticmaalayo geed dhamaystiran ee geedi socodka.
• Si toos ah ayaa loo abuuray aragtida 3D ee daaqad gaar ah si loogu oggolaado soo bandhigida dhammaan dhismaha dhismaha ama, tusaale ahaan, qayb ka mid ah heerka.
• Qodobada sida derbiyada, daaqadaha, albaabada, iwm, ayaa hadda la geliyay iyadoo la adeegsanayo farsameynta raadinta caqli ahaaneed.
• Xulashada derbiyada noocyada la qeexay ama qaabeynta dhismaha derbiga isku dhafan.
• Diiwaangalinta isku-dhafan ee qalabka dhismaha ee ku saleysan PN-EN 6946 iyo PN-EN 12524.
• Ku dhejinta derbiyada wicida ee aan muuqanin horudhaca 3D ama qeybta iskutallaabta. Waxay u qaybiyaan qolka qolka si ay u kala saaraan hawlaha meel bannaan, tusaale ahaan.
• Isbeddelka kuleylka kulaylka ayaa si toos ah loo xisaabiyaa iyadoo loo eegayo maaddooyinka loo xushay qaybaha xayndaabka (darbiyada, saqafka iyo saqafka).
GURYAHA IYO KORONTADA:
• Gelinta dariishadaha iyo albaabada iyada oo loo marayo xaddiga maktabadda barnaamijka iyo abuurista daaqadaha iyo albaabada ay qeexeen isticmaalaha.
• Suurtogalka ah in la qeexo koritaanka (dhismaha) ee daaqada daaqadda gudaha iyo dibedda qolka, iyo sidoo kale dhumucdeeda.
• Suurtogalka ah in laga jaro guntinta daaqadda.
• Qalabka si toos ah ee dabaqyada (sida ku xiran nidaamka heerka).
• Module waxaa loo isticmaalaa si loo diyaariyo sawirro loo isticmaalo qaabeynta qaabka dhismaha hoostada Teriva. sawirada waxaa ka mid ah dhammaan qaybaha waaweyn ee nidaamka: alwaaxdii saqafka, alwaaxdii saqafka haysay cross, alwaaxdii saqafka haysay qarsoon, goo'go, KZE iyo xubno KWE albaabka fayaaraddiisa sare iyo KZN KWN, xidhka taageero iyo sidoo kale dhammaan liisaska loo baahan yahay qalab daboolaya xubno liis gareynaya, birta la xoojiyey iyo dhismaha monolithic loo baahan yahay si loo abuuro saqaf.
• xisaabinta Automatic iyo buuga oo dhan saqafka Teriva (4.0 / 1, 4.0 / 2, 4.0 / 3, 6,0, 8,0) meelaha of qaab kasta oo saqafka.
• Qaybinta si toos ah ee musqulaha, saqafka dhaadheer, saqafyada gudaha ee gudaha gudaha iyo dibaddaba iyo sidoo kale meelaha ugu muhiimsan.
• Beddelka tooska ah ee nidaamyada naaquska ee furfurista iyo saqafyada qaybaha.
• Qalabka si toos ah oo loogu talagalay gelitaanka dhinaca saqafka ee dhinaca derbiga.
• Xisaabinta iyo qaabeynta tooska ah ee loo yaqaan alaabta guriga iyo taaga loo baahan yahay.
• Qaadida qolal nadiif ah oo ka soo horjeeda derbiyada xiran iyo darbiyada derbiga.
• Heerkulka iyo shuruudaha iftiinka si toos ah ayaa loogu talagalay qolalka, iyadoo ku xiran magacyadooda.
• Suurtogalka ah in la bedelo sawirka muuqaal ee qolka aragtida, tusaale ahaan, buuxinta ama midabka.
VIGUETTES WADAJIRA WAQTIGA:
• Isku-duubnaanta kubbadda Union, oo ay ku jiraan xoojinta lagu qeexay baararka iyo baararka labadaba.
• Isku-geynta saldhigyada qaybta iskudhafka iyo curyaaminta.
• Kala saarida furitaanka birta qoryaha ama qoryaha dabka (kooxo qulqulo leh tiro badan oo iskutallaab ah iyo xariiqyo).
• Suurtogalka ah in la geliyo dareerayaasha shooladda ama calaamadaynta bixitaanka qiiqa xanniban.
• Noocyada shooladda cusub.
• Qeexida marinnada hal mar iyo kuwo badan iyo jaranjaro isdaba joog ah qorshe kasta.
• Noocyada cusub ee jaranjarooyinka: monolithic leh qoryaha ama lagu arkay jajab. Suurtagalnimada xulashada nooca iyo qaybaha tallaabo.
• Abuuritaanka otomaatiga ah ee qaab dhul ah oo ku saleysan heerarka sare ee khariidado digital ah ee qaabka DWG.
• Isku-darka diyaarad dhulka ah adigoo isticmaalaya dhererka dhibcaha ama khadadka.
• Kala saaro walxaha isku daya walxaha shabakada ama walxaha jira ee degaanka si ay u xaqiijiyaan jiritaanka iskuxirnaanta qaabeynta.
• Kala saarista iyo isbedelka qaabeynta qalabka, laga bilaabo aragtida kormeeraha, kaas oo loo isticmaali karo si loo eego naqshad ama ujeedo badbaadin.
• Muuqaalka hadda waxaa lagu keydin karaa faylal ku qoran qaabka BMP, JPG ama PNG.
• Suurtogalka ah in la geliyo xargaha xargaha farsameysan, oo ay ku jiraan xulashooyinka dhamaystiran oo dhamaystiran.
• Abuuritaanka qaybaha cinwaanka ee lagu qeexay isticmaalaha sanduuqa wada-hadalka ama hagaajinta goobaha garaafka.
• Gelinta qoraallada tooska ah (laga soo qaato naqshad) ama waxay ku qeexday isticmaalaha ku yaal block block.
• Ku dhaji qaybaha cinwaanka mashruuca mashruuca ama barnaamijyada.
• Keydso habka loo isticmaalo qaab-dhismeedyada (calaamadaha, calaamadaha, nooca caadiga ah, dherarka, iwm.).
• Maamulaha Nooca ayaa loo isticmaalaa si loo maareeyo moodooyinka lagu isticmaalo dukumentiyada jira ee maktabadda caalamiga ah. Laga bilaabo hadda, waxaa lagu badbaadin karaa sheybaarada noocyada walxaha la isticmaali doono.
• Kooxaha kala duwan ee noocyada kala duwan ayaa lagu keydin karaa hal nooc. Dhammaan isku xirnaanta, xajmiga alaabta iyo xuduudaha kale ee qofka ayaa lagu keydin karaa hal qaab oo loo isticmaali karo mashaariicda mustaqbalka. Naqshadeynta waxaa loo qaybin karaa si loo bedelo shakhsiyaadka gaarka ah ee kooxda.
• Maktabad midaysan oo loogu talagalay dhamaan walxaha qayb kasta.
• Isbeddelka maktabadda inta lagu jiro naqshadeynta, oo lagu badbaadinayo noocyada la abuuray.
• Isbeddelka maktabadda ee daaqada maktabadda adoo ku daraya, dib u habeyn iyo tirtirida noocyada maktabadda caalamiga ah ama maktabadda ama maktabadda mashruuca.
• Qodobbada aan habboonayn ee qummanaanta iyo geeska ah ee qaabaynta.
• Qaybaha qolalka oo si toos ah loogu abuuray heer kasta.
• Liisaska daaqadaha iyo albaabada ayaa si toos ah loo abuuray, oo ay ku jiraan calaamado.
• Liiska waxaa loo dhoofin karaa faylka RTF iyo faylka CSV (feylka).
• La xiriirka nidaamyada kale.
• Mashruucyada waxaa loo dhoofin karaa qaabka XML.
• Awoodda lagu saxo oo saxo xayeysiisyada ka hor intaan la kaydin. Qoraan liistooyinka iyo ku dar sida logo.
• Qormo cusub oo loo yaqaan 'ArCADia-Text' ayaa la heli karaa. Waxay bilaabataa marka loo dhoofiyo faylka RTF.
• ArCADia-Qoraalku wuxuu kaydiyaa qaababka soo socda: RTF, DOC, DOCX, TXT iyo PDF.
• Maktabadda isku dhafan ee waxyaalluhu waxay u oggolaaneysaa sawirada in ay faahfaahinayaan calaamadaha dhismaha ee 2D.
• Maktabadda 3D waxay u oggolaaneysaa inay sameeyaan gudaha gudaha si loogu diyaariyo.
• Diiwaanka qalabka waxaa lagu kordhin karaa maktabadaha cusub.
• Qalabyada isticmaalaha, oo lagu sameeyay waxyaabo 2D, ayaa lagu keydin karaa maktabadda barnaamijka.
• Shayada 2D iyo 3D ayaa lagu gelin karaa xagal xajmiga Z ee la siiyay inta lagu jiro gelinta.
• Awood u lahaanshaha sheyga wareega ee x ee X iyo Y iyo sidoo kale badalaadda calaamad muujinaysa marka loo baahdo.
MASUULIYADAHA (si toos ah loo ogaado isku dhaca iyo isgoysyada u dhexeeya xubno ka mid ah habka ArCADia BIM):
• Isku dhacyada wax kasta oo ka mid ah nidaamka Arcton BIM waxaa lagu qori karaa si xor ah.
• Soo saarista liisaska cad ee isku dhaca ee mashruuca, tilmaamayaasha qodobada qorshaha iyo aragtida 3D ayaa la heli karaa.
Maydhaya garaafka garaafka
Barnaamijka waxaa lagu heli karaa laba nooc, oo u ogolaanaya macaamiisha inay u qabsadaan baahidooda iyo hawlaha naqshadeynta hadda. Shirkadda ArCADiasoft waa xubin ka mid ah ITC (IntelliCAD Technology Consortium, USA), mulkiilaha kelidii ah ee xuquuqda daabacaadda ee khadka siyaasadda ee IntelliCAD. Xubinnimada ArCADiasoft ee shirkadda ITC waxay xaqiijinaysaa in macaamiisheena si joogto ah loo soo saaro horumarka software-ka ugu dambeeya iyo is-bedbeddel joogto ah ee barnaamijka. Software waxay leedahay interface cusub garaafka ah, halkaas oo dhamaan fursadaha ay ku yaalaan tuubooyin ku yaal xagga sare ee shaashadda.
MUHIIMKA SIDA LAGA HELO:
Barnaamijka ArCADia wuxuu leeyahay dhammaan muuqaalada barnaamijka ArCADia LT waxaana lagu sii kordhiyay shaqooyinka soo socda:
• sawiro 2D Hagaajinta (hal, multiline, splines, Dakatu iyo fursadaha kale ee sawir) oo dhammeystiran ka beddelid abuurka (with Tilmaamo fudud iyo mid horumarsan: Beveled, nasasho, xidhiidh, soo beegay, iwm).
• Abaabulista sawirada 3D (jajab, konfureed, isugeyn, isbarbar dhejin, boodheer, iwm) iyada oo la adeegsanayo sawirka iyo isbeddelka dhamaystiran ee dhammaan walxaha iyo sidoo kale xulashada akhriska ee adag ee ACIS.
• Ku-dhajinta tixraacyada la geliyay faylasha DWG.
• Lakabka cusub ee maareynta maareynta, oo ay maamusho lakirida maamulaha, taas oo ah aalad cusub oo lagu maareeyo loona shaaciyo lakabyada. Fursadda lagu dooranayo lakabka lakabka iyo lakabka lakabka waxaa lagu sameeyaa daaqada agagaarka waraaqda.
• Hawlaha xulashada degdegga ah.
• Sawirka sawir-celinta iyo ikhtiyaarka dhiibashada. model horumariyo software The da'ayeen ku yimaado qalabka kala duwan ka dalbatay in diyaarado shaqsi, kala dusha siman iyo xoqdo, darfaha muraayad, meelaha ciinwaanka shadings cayimista dhibic ka mid ah daawashada, kala duwan oo ka mid ah jagooyinka la daawado iyo iftiiminta.
• Isku-xirka software-ka ee la doonayo.
• Khadadka taliska iyo dilkooda
• Ka shaqeeya lakabyada.
• Khariidad la mid ah xarunta qaabaynta.
• Qalabka guryaha la kariyo.
• Ka shaqeeya Iskuduwaha iyo jaangooyooyinka kutlada.
• Noocyada qoraalka iyo qoraalka.
• Taageerida, sifooyinka, hirgelinta.
• Hawlaha sawir-qaadista ee saxda ah iyo dejinta dhibcaha (ESNAP), habka sawirka (Ortho), iwm.
• Suurtogalka ah in la soo dejiyo khadadka iyo qaababka qiyaasidda.
BUUXINTA GUUD OO LOOGU TALAGALAY:
• Turjubaanka la hirgeliyey ee luqadda barnaamijka LISP waxay u oggolaaneysaa in lagu soo rogo codsiyada lagu soo saaro luqado kale.
• Intaa waxaa dheer, sifooyinka software waxaa lagu kordhin karaa iyada oo lagu rakibayo dariiqooyinka SDS, DRX iyo IRX.
ArCADiasoft waa xubin ka mid ah ITC. Qaar ka mid ah qawaaniinta ilaha macluumaadka ee IntelliCAD 8 ayaa loo isticmaalay barnaamijka.
• Kombuyuutar leh processor processor class (Intel Core i5 ku taliyey)
• Xasuusta ugu yaraan 2 GB RAM (8 GB ayaa lagu talinayaa)
• 3 GB meel adag oo bilaash ah oo lagu rakibo
• Kaarka sawir ee taageera DirectX 9,0 (kaadhka 1GB RAM ayaa lagula talinayaa)
• OS: Windows 10 ama Windows 8 ama Windows 7
[/ bogga soo socda]
[cinwaanka bogga soo socda = »ArCADia 10 PLUS»]
Guud: € 599,76
Demo Soo Dejiso
Waa maxay ArCADia PLUS 10?
ArCADia 10 Plus software waxay leedahay dhamaan astaamaha ArCADia LT iyo software ArCADia. Intaas waxaa sii dheer, waa la xoojiyaa lana wanaajiyaa howlaha soo socda:
Ikhtiyaarka in la abuuro oo wax laga beddelo maaddada ACIS oo dhan. Faylasha ACIS waxay ku saleysan yihiin qaabka naqshadeynta naqshadeynta ee ay soo saartay shirkadda 'Spatial Technology Inc.'
Suurtagalnimada in loo oggolaado shaqada saxda ah ee adkaha dhammaystiran, gunta, isugeynta, kaladuwanaanta, iwm.
Soo dejinta iyo dhoofinta feylasha qaab SAT ah.
MAAMULKA DAAWEYNTA DHISMAHA:
• Maareynta aragtiyaha iyo macluumaadka la soo bandhigay waxay adeegsanayaan geedka Mashruuca Mashruuca oo dhameystiran.
• Muuqaalka si toos ah loo abuuray ee 3D waxaa laga heli karaa daaqad gooni ah si loogu oggolaado soo-bandhigidda jirka oo dhan dhismaha, tusaale ahaan, qaybta heerka.
• Xulashada darbiyada nooca la cayimay ama qaabeynta darbiga wax walba ka kooban.
• Geli darbiyada dalwaddii aan ka muuqan muuqaalka 3D ama qaybta iskutallaabta. Waxay u qeybsan yihiin qolka qolka si ay u kala saaraan shaqada bannaan ee furan, tusaale ahaan.
• Feejignaanta kuleylka wareejinta ayaa si otomaatig ah loo xisaabin doonaa iyadoo lagu saleynayo waxyaabaha loo xushay kala qeybinta meelaha bannaan (darbiyada, saqafka, iyo saqafka).
• Gali galida daaqadaha iyo albaabada xuduudaha maktabadda barnaamijka iyo abuurista daaqadaha iyo albaabada uu isticmaaley isticmaaleygu.
• Suurtagalnimada qeexitaanka marin-haynta daaqadda sill gudaha iyo banaanka qolka, iyo dhumucdiisuna waxay leedahay.
• Suurtagalnimada xirida shaashadda daaqadda.
• Qaybta waxaa loo isticmaalaa in lagu diyaariyo sawirada nidaamyada saqafka dhismaha ee Teriva. Sawirrada waxaa ku jira dhammaan walxaha ugu muhiimsan ee nidaamka: alwaax saqafka ah, alwaaxyo iskutallaab ah, belal qarsoon, jajaban, KZE iyo KWE, KZN iyo KWN walxaha lintel, grilles support iyo, intaa waxaa dheer, dhammaan liisaska lagama maarmaanka u ah agabyada daboolaya walxaha. waxaa ku taxan, oo lagu kabo birta la xoojiyay iyo tareenka monolithic ee loo baahan yahay in la abuuro saqaf.
• Xisaabinta otomatiga ah iyo kan gacanta ee dhammaan saqafyada Teriva (4.0 / 1; 4.0 / 2; 4.0 / 3; 6,0; 8,0) aagagga saqafka si kastaba ha noqotee.
• Qaybinta otomaatiga, guluubyada lagaliyo iyo alwaaxyada darbiyada gudaha iyo bannaanka iyo sidoo kale guluubka waaweyn.
• Hagaajinta otomaatiga ee nidaamka goynta ee loogu talagalay furitaanka iyo laambadaha darbiyada qeybinta.
• Dhex gelinta furitaanka sicirka qiiqa ama qiiqa shiidaalka (kooxo qiiq-qiiq leh dhowr tiirar iyo xariiq go'an).
• Qeexitaanka jaranjarooyinka hal-laba iyo dhowr-sidoo kale jaranjarooyinka wareega oo qorshe kasta.
• Noocyada cusub ee jaranjarada: monolithic-ka leh jiidisyo ama aragti-isugeyn leh xargaha. Suurtagalnimada xulashada nooca iyo waxyaabaha tallaabada ah.
• Abuuritaan otomaatig ah oo qaab dhul ah kuna saleysan dhererka dhibcaha khariidadaha DWG dhijitaalka ah.
• Galinta walxaha ka dhigaya walxaha shabakadda ama walxaha jira ee dhulka jooga si loo hubiyo inay shilalka ku dhacayaan qaabeynta.
Awoodda gelinta grid of axes modular, oo ay ku jiraan ikhtiyaarrada tafatirka buuxa.
Abuuritaanka baloogyada cinwaan-tilmaameedka isticmaale-ku qeexay sanduuqa wadahadalka ama adeegsiga xulashooyinka muuqaalka tafatirka garaafka.
Gelitaan otomaatig ah (laga soo qaatay qaabeynta) ama isticmaale lagu qeexay cinwaankiisa.
Kaydinta buqshadda cinwaanka ee mashruuca ama maktabada barnaamijka.
• Kaydso dejinta qeexitaanka isticmaalaha ee walxaha (buuggaag, boodhadhka, noocyada caadiga ah, dhererka, iwm.)
Maareeyaha Nooca ah waxaa loo isticmaalaa inuu ku maareeyo moodooyinka loo isticmaalo dukumintiga oo ka jira maktabadda adduunka. Hadda laga bilaabo, waxaa lagu keydin karaa shay wata noocyada sheyga loo adeegsado.
• Abuuritaan otomaatig ah ee liisaska qolka heer kasta.
• Abuuritaan otomaatig ah oo liisaska daaqadda iyo liistada albaabka, oo ay ku jiraan calaamadaha.
• Awoodda wax lagu saxo iyo la saxo xayeysiiska ka hor inta aan la keydin. Liisaska daabac oo ku dar, tusaale ahaan, astaamo.
• Maktabad isku dhafan oo ka kooban walxaha ayaa u oggolaanaya sawirradu inay faahfaahin ka bixiyaan calaamadaha naqshadda naqshada ee 2D ee loo baahan yahay.
Objects Walxaha loo adeegsado qeexan ee lagu abuuray walxaha 2D waxaa lagu keydin karaa maktabada barnaamijka.
• 2D iyo 3D walxaha waxaa lagu qori karaa xagal xagal X ah inta la galinayo.
• Ururinta shey kasta oo ka mid ah nidaamka 'ArCADia BIM' waa si xor ah loo tirin karaa.
• Liisaska cad ee la fahmi karo ee shilalka jira ee mashruucan iyo tusayaasha dhibcaha ayaa laga heli karaa labadaba qorshaha iyo aragtida 3D.
Software-ka ayaa lagu heli karaa laba nooc, taas oo u oggolaanaysa macaamiisha inay ku waafaqaan baahiyahooda iyo howlaha naqshadeynta hadda jirta. ArCADiasoft waa xubin ka tirsan ITC (IntelliCAD Technology Consortium, USA), oo ah xuquuqda lahaanshaha kaliya ee koodhadhka isha ee IntelliCAD. Xubinnimada ArCADiasoft ee xiriirka ITC waxay hubineysaa in macaamiisheenna si joogto ah loo siiyo barnaamijyada ugu dambeeyay ee barnaamijyada iyo cusboonaysiinta barnaamijka. Softiweerku wuxuu leeyahay istiraatijiyad garaafyo cusub, halkaasoo xulashooyinka oo dhan ay ku jiraan cajalado ku yaal meesha sare ee shaashadda.
• Software ArCADia wuxuu leeyahay dhamaan astaamaha barnaamijka ArCADia LT waxaana lagu sii wanaajiyay howlahan soo socda:
• Abuuritaanka sawirrada 2D oo hagaagsan (fudud, multiline, splines, sawirro iyo sidoo kale xulasho kale oo sawir leh) iyo wax ka beddelid buuxda (oo leh howlo sahlan oo aad u horumarsan: bevel, jab, iskuxirid, ciyaar, iwm.).
• Abuuritaanka sawirro 3D ah (tuubbado, koollo, isbarbar dhig, isbarbar socda, dhululub, iwm.) Adoo sawiraya oo gabi ahaanba wax ka beddelaya dhammaan walxahaas marka lagu daro xulashada aqriska ACIS.
Lakabka cusub ee howlaha maaraynta, oo uu maareeyo maareeyaha daabacaadda lakabka, waa aalad cusub oo lagu maareeyo oo lagu shaandheeyo lakabyada. Ikhtiyaarada si loo dhigo daah furnaanta lakabka oo la qaboojiyo waxaa laga samayn karaa daaqadda aagga warqadda.
• Shaqada xulashada dhakhsaha leh ee horumarsan.
Soo gudbinta sawir-macquul ah iyo ikhtiyaar muujineed. Moodeelka qaab dhismeedka leh ee softiweerka waxaa lagu soo bandhigay agab kala duwan oo lagu dabaqay diyaarado gaar ah, kala soocida meelaha jilicsan iyo meelaha xun, muraayadaha muraayadaha, meelaha iftiimaya iftiinka, qeexida goobta daawashada, kaladuwan ee fiirinta iyo iftiinka.
• Qalabka barnaamijka kumbuyuutarrada cad-cad oo fahmi kara.
• Taageero, astaamo, dillaacsho.
[cinwaanka bogga soo socda = »ArCADia AC»]
Waa maxay ArCADia AC?
ArCADia AC waa qalab-kuxirid loogu talagalay barnaamijyada 'AutoCAD' kaas oo awood u siinaya soo-gelinta iyo wada-xiriirka howlaha aasaasiga ah ee nidaamyada ArCADia oo leh softiweerka 'AutoCAD'.
Isgaadhsiinta softiweerka 'AutoCAD'
• ArCADia AC waa nooc gaar ah oo nidaamka kuu saamaxaya inaad ku rakibto kumbuyuutar AutoCAD
• Maamulka aragtida iyo macluumaadka la soo bandhigay waxay adeegsanayaan geedka Maareynta Mashruuca oo dhameystiran.
• Muuqaalka si toos ah loo abuuray ee 3D waxaa laga heli karaa daaqad gooni ah si loogu oggolaado soo-bandhigidda dhammaan dhismaha dhismaha ama, tusaale ahaan, qayb ka mid ah heer.
• Geli darbiyada dalwaddii aan ka muuqan muuqaalka 3D ama qaybta iskutallaabta. Kuwani waxay u qeybsan yihiin qolka qolka si ay u kala saaraan shaqada bannaan ee furan, tusaale ahaan.
• Gali galida daaqadaha iyo albaabada iyada oo loo marayo cabbiraadaha maktabadda barnaamijka iyo sidoo kale abuurista daaqadaha iyo albaabbada isticmaalaha lagu qeexay.
• Suurtagalnimada qeexitaanka marinka daaqadda sill gudaha iyo banaanka qolka, iyo dhumucdiisuna waxay leedahay.
• Suurtagalnimada xirida windowsill-ka.
Qaybtan waxaa loo isticmaalaa in lagu diyaariyo sawirada nidaamyada saqafka dhismaha ee Teriva. Sawirradan waxaa ku jira dhammaan waxyaabaha ugu muhiimsan ee nidaamka: alwaaxyada saqafka ah, alwaaxyada iskutallaabta ah, alwaaxyo qarsoon, jarjaranno, KZE iyo KWE, KZN iyo KWN walxaha lintel, xargaha taageerada iyo, intaa waxaa dheer, dhammaan liisaska lagama maarmaanka u ah agabyada daboolaya walxaha. liiska, oo lagu kabo birta la xoojiyay iyo tareenka monolithic ee loo baahan yahay in la abuuro saqaf.
• Galiin isku xirayaasha iskuxirayaasha, oo ay kujirto xoojinta qeexan labada baararka iyo dhaqaajinta.
• Gelinta furitaanka sicirka qiiqa ama tuubbooyinka sicirka qiiqa (kooxo qiiq-qiiq leh dhowr tiirar iyo xariiq go'an).
• Noocyada cusub ee jaranjarooyinka: monolithic oo leh tillaabooyin ama muuqaal iyada oo la adeegsanayo xariijiyeyaasha.
• Suurtagalnimada xulashada nooca iyo waxyaabaha tallaabada ah.
• Awoodda gelinta xariijin maaliyadeed oo toosan, oo ay ku jiraan xulashooyinka tafatirka buuxa.
• Abuur qormooyin cinwaan u-qeexan isticmaale-ku tilmaaman santuuqa wadahadalka ama adeegso xulashooyinka muuqaalka tafatirka sawir garaafka.
Ku keydi baloogyada cinwaanka mashruuca ama maktabada barnaamijka.
• Kaydiya dejinta isticmaalaha lagu qeexay walxaha (buuggaag, boodhadh, noocyo taban, dhaadheer, iwm.).
• Nooca maamulaha waxaa loo isticmaalaa inuu ku maareeyo moodooyinka loo isticmaalo dukumintiga oo ka jira maktabadda adduunka. Hadda laga bilaabo, waxaa lagu keydin karaa shay wata noocyada sheyga loo adeegsado.
• Wax ka badalida maktabadda ee daaqadda maktabadda adigoo ku daraya, wax ka beddelaya oo tirtiraya maktabadda / isticmaaleyaasha caalamiga ah ama noocyada maktabadda mashruuca.
• Suurtagal in wax laga beddelo oo la saxo liistooyinka inta aan la keydin. Liisaska daabac oo ku dar, tusaale ahaan, astaamo.
• Maktabad ay ka kooban yihiin walxaha 3D ayaa u oggolaaneysa gudaha inay abuuraan.
• Liis garee oo si taxadir leh loo fahmi karo ee shilalka mashruuca iyo sidoo kale tilmaamayaasha qorshaha iyo aragtida 3D ayaa la heli karaa.
• barnaamijka 'Autodesk AutoCAD 2014/2015/2016/2017'
[cinwaanka bogga soo socda = »ArCADia LT 10 ″]
Soo dejiso fiidiyowga
Waa maxay ArCADia LT 10?
ArCADia LT 10 waa mid si buuxda u shaqeynaya, fududahay in la shaqeeyo oo la fahmo barnaamijka CAD kaas oo u oggolaanaya abuurka ku saleysan abuurka dokumentiga dhismaha 2D wuxuuna keydiyaa feylasha qaabka DWG laga soo bilaabo 2013. Waa aalad naqshadeynta naqshada garaafyada aasaasiga ah ee warshadaha dhismaha ee dareenkeeda ballaaran.
Aaladda Aasaasiga ah ee Nidaamka ArCADia BIM:
• Waxay u oggolaaneysaa maamulka aragtida iyo macluumaadka la soo bandhigo iyadoo la adeegsanayo geedka Maareeyaha Mashruuca dhameystiran qaab la fahmi karo.
• Walxaha sida derbiyada, daaqadaha, albaabada, iwm., Ayaa hadda la geliyay iyaga oo adeegsanaya hawsha raadraaca caqliga leh.
• Buug-yarayn isku-dhafan oo ah qalabka dhismaha ee ku saleysan PN-en 6946 iyo PN-en 12524 heerarka.
• Kaydi buuggaagta cinwaannada ah maktabada mashruuca ama barnaamijyada.
ArCADia LT waxay u oggolaaneysaa isticmaalaha inuu sawiro oo uu wax ka beddelo dukumiintiyada 2D, oo uu u sawiro sawirro raster ah (tusaale ahaan khariidadaha geodetic), sharraxaad ka bixiyo sawirrada iyadoo la adeegsanayo xarfaha 'TrueType' ama 'SHX', gelinta baloogyada dukumiintiyada kale, iyo si taxaddar leh dukumiintiyada dukumiintiyada loo daabaco.
Muuqaalka dareenka wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ka shaqeyso isku-duwaha ama gelinta xogta adoo isticmaalaya dherer iyo xaglo. Barta taliska ayaa isbeddeleysa heerar kala duwan oo sawirka iyo nidaamka wax ka badalida; marka lagu daro bixinta xulashooyinka kaabayaasha ah ee ugu waxtarka badan wakhtigaas. Xulashada howlaha kuwaas oo ah kuwa ugu muhiimsan sawirka ayaa u oggolaaday in xulashooyinka lagu dhaqan geliyo hab habsami iyo hab fudud. Sidoo kale, aaladaha ugu muhiimsan ee loo rogo Grid On and Off, Ortho, Entity snaps, Maareeyaha Mashruuca, iyo 3D Daaqada Muuqaalka, Wax ka Beddelka Mawduucyada Isweydaarsiga) ayaa la geliyay shaashadda hoose, iyadoo la samaynayo wada xiriirka barnaamijka iyo shaqada lafteedu way fududahay oo dhaqso.
• Cashar kasta waa lagu sawiri karaa iyadoo la adeegsanayo xariijimo, boodhadhyo, wareegyo, arkisyo, liisaska, polygons-ka caadiga ah, iyo leydi.
• Tafatir qaybaha sawirka adoo adeegsanaya aaladaha soo socda: dhaqaaq, koobi, cabir, wareeg, muraayad, koox, dalag, miyir iyo magdhow. Isticmaalaha ayaa dooranaya shayga in la beddelo ka dibna wuxuu muujiyaa hawsha la qabanayo.
• Xirmooyinka Xirmooyinka: Wareegyada, polygons, iyo leydi waa la sixi karaa si xor ah iyadoo la adeegsanayo hannaanka lagu muujiyey daaqadda Guryaha Elementary.
• Abuur oo keydi baloogyada: loogu talagalay kooxo xubno ah oo sameeya calaamad gaar ah. Baloog ayaa lagu keydiyaa dukumenti cusub waxaana lagu gelin karaa labadaba sawirkii lagu sameeyay iyo sawir kasta oo kale. Markasta oo meel la galiyo, barnaamijku wuxuu wax ka weydiinayaa kor u qaadista iyo wareejinta suuragalka ah.
• Sharaxaadda sawirradan waxaa lagu sameeyaa iyadoo la adeegsanayo qoraalka multiline oo leh xarfaha SHX iyo TrueType. Qoraalka waxaa la galiyayaa dariishado dheeri ah oo la soo bandhigo ka dib markii ikhtiyaar loo helo. Cabbirkeeda, nooca font, caddeynta iyo waxyaabaha kale ee la midka ah waxaa lagu qeexay daaqadda qoraalka multiline.
• Waa suurta gal in la geliyo borotokoolka bitmap-ka qaabab caan ah sida JPG, BMP, TIF iyo PNG. Qalabka soo socdaa waxaa laga heli karaa halkan: dillaacinta, dillaacidda, isbeddelka iftiinka, is-barbardhiga, iyo wareegga.
• Xaashida xayeysiiska waxaa lagu dhejiyaa toos ahaan aagga sawirka. Si cad oo fudud, waxay muujineysaa sida daabacaddu u ekaan doonto.
• Cabbirka xaashida saxaafadda iyo cabirka waxaa loo qeexi karaa si xasaasi ah.
• Ikhtiyaaraadka barnaamijka waxaa lagu ballaariyey howlaha aasaasiga ah ee nidaamka ArCADia BIM, ama walxaha caqliga leh ee abuuraya qaabab dhismeed oo lagu dhisay qaab ku saleysan xulashooyinka cutubyada warshadaha ee gaarka ah.
ArCADiasoft waa xubin ka tirsan ITC. Qaar ka mid ah koodhyada isha 'IntelliCAD 8' ayaa loo adeegsaday barnaamijka.
[Nextpage cinwaanka = »ArCADia Architecture 8 ″]
ArCADia BIM - Modules Architecture
Demo soo dejiso:
Soo degso fiidiyowga:
Waa maxay ArCADia-ARKITATII 8?
ArCADia-ARCHITECTURE waa cutub u gaar ah warshadaha ee nidaamka ArCADia BIM, oo ku saleysan fikirka Dhismaha Macluumaadka Dhismaha (BIM). Barnaamijka waxaa loo adeegsan karaa in lagu abuuro dukumentiyo aqoonyahan oo naqshad leh. Iskusoo wada duuboo, waxaa loogu talagalay naqshadeeyeyaasha iyo dhammaan kuwa qaabeeya iyo dib u soo celinta foomamka dhismaha.
ArCADia-ARKIINTA waxaa loo isticmaalaa abuurista ku saleysan ujeeddooyinka ee qorshayaasha naqshadeynta xirfadeed iyo qaybaha, firaaqadaha 3D ee is-dhexgalka, iyo muuqaal dhab ah. Barnaamijka waxaa ku jira shaqooyin takhasus u leh qaab dhismeedka sida: iskutallaabyada otomatiga ah, cabbirka otomatiga ah, ama soo dejinta qaababka sheyga laga helo barnaamijyada kale.
• Galinta xargaha, derbiyada hal-lakab iyo kuwa badan.
• Suurtagalnimada in la beddelo sawir 2D ah oo laga sameeyay khadadhadhadal ama khadad diyaaradeed oo ka kooban hal ama in kabadan lakab, darbiyo munaasib ah ama qorshe aasaaska.
KHATARAHA IYO DHAQAALAHA CARRUURTA ScriptT:
• Gali galida daaqadaha qaabab kala duwan (wareeg, saddex geesood, leh faras, iwm.), Oo ay kujirto suurtagalnimada sameynta qaybo siman iyo toosan iyo sidoo kale qeexida aragtida daaqadaha ama goynta lafteeda furitaanka (iyada oo aan daaqad lahayn) darbiga. qaab daaqado gaar ah (albaabbo).
• Gelitaanka hal albaab iyo laba jibbaarane, oo ay ku jiraan dhinac dheer ama nalal sare.
• Daaqado cusub ayaa lagu daray maktabada qoraalka; hal-qayb, laba-qaybood iyo saddex-qaybood oo leh fursado lagu galo burqado ama furitaan dariishadeed
• Waxyaabaha soo socda ayaa lagu soo daray, iyo waxyaabo kale, maktabada albaabka: rogida, isjiidjiid, wiishashka iyo albaabka daadguraynta.
• Gelitaanka fur fur ah oo ballac iyo dhumucba lagu goglay darbiga bidix iyo dhinaca midig (galinta wixii dherer ah).
• Suurtagalnimada gelitaanka god qoto dheer oo horay loo go'aamiyey.
• Galinta dabaqa kasta oo muujinaya qaabkiisa.
• Dhex gelinta dabaqa sagxada qolalka heerka ugu hooseeya.
• Soo bandhigida godadka saqafka tooska ama gacanta.
• Galiin tiirarka toosan iyo xariijimaha bir jiifa.
• Dhex gelinta shey bir toosan leh.
• Gelida xarkaha baararka faylka .f3d, kaasoo u muuqda shay laakiin loo isticmaali karo loona arki karo hal bar oo keliya (in la dhaqaaqo oo la kala saxo).
• Galiin badan oo ka mid ah ashyaada leh xaddi qeexan, dheereyn iyo jihada galinta.
• Abuuritaanka jaranjarooyin wareegsan oo leh tiir ama aan lahayn tiir.
• Dhex gelida khafiifyo shaqsiyeed ama go'yaal nasasho.
• Gelitaan otomaatig ah iyo lacag la'aan ah saqafyada saqafka ah, oo ay ka mid yihiin xulashooyin badan oo wax-ka-beddelid ah (beddelaad saqaf keliya ama saqaf laba-duulimaad leh, beddelidda dhererka darbiga gaaban iyo daarad kasta oo gooni ah).
• Gali galida daaqadaha iyo daaqadaha saqafka.
• Galinta saqafka nalka cirka la galiyay (attic).
• Gelitaanka qaab alwaax ah barnaamijka R3D3-Frame 3D (sagxadaha saqafka loo dhoofiyay R3D3-Frame 3D qaab ahaan qaab ahaan ayaa loo xisaabiyaa, halka saqafka saqafka ahna dib loogu celiyo ArCADia-ARCHITECTURE).
• Galinta daaqadaha saqafka.
• Gelitaanka saqafka saqafka otomaatig ah ama buugga.
• Galiinta tuubooyinka tuubooyinka qaada oo si toos ah u ogaan kara gutter-ka iyo heerka dhulka.
• Gelitaan otomaatig ah ama mid gacmeed ah taayirrada dhaqaaqa.
• Gelida qiiq, xirmooyin hawo qaboojiye iyo hoodh baraf leh.
• Gelitaanka ilaalada barafka: dayrarka barafka, jajabinta barafka iyo daboolida.
• Suurtagalnimada qeexida nooca saqafka kahor intaadan galin.
• Fursadaha raadraaca ayaa horeyba loo heli jiray markii saqafka la gelinayo.
• Suurtagalnimada gelinta saqafka qoraxda saqafka.
• Galinta aag lug ama cag kasta oo lagu qeexay qorshaha.
• Ku sawir qaab kasta oo adag oo leh dherer go'an. Adkaanta waxaa loo sii isticmaali karaa terrace, madal, mezzanine, iyo wixii la mid ah.
• Galinta aag adag oo cayiman oo ballac ah iyo sarajoog, tusaale ahaan, isku-xidhka iyo laambadaha wadajirka ah, oo ay kujirto awoodda lagu xusho xariiq gunta ama gees.
• Caloolladaha waxaa lagu galiyaa qaab duluc leh.
• Tafatirida cunnooyinka adkaha u kala qaybinaya iyo abuurista dalool kasta ...
• Soo dejinta walxaha qaababkan soosocda: 3DS, ACO iyo O2C.
• Astaamaha lagu qeexay (walxaha 2D) waxaa lagu keydin karaa maktabada barnaamijka.
• Jiil ka mid ah xirmo mashruuc, oo ah suurta galnimada in mashruucan lagu raro agabyo la soo dhoofiyo kombiyuutar meesha maktabada sheyga caadiga ahi uusan ku jirin ashyaaadan.
• Suurtagalnimada in la keydiyo shay ka mid ah waxyaabaha ka mid ah nidaamka ArCADia ee maktabadda, tusaale ahaan, sheyga laga abuuray qaababka xayawaanka.
• Abuuritaan otomaatig ah oo ah qeyb isugeyn ah oo muujineysa xariijinta xarigga dhismaha, oo ay kujirto suurtagalnimada qeexitaanka walxaha muuqda ee qeybta iskutallaabta.
• Gali qayb iskutallaab ah oo la istcimaalay tiro kastoo laabtooyin ah.
• Gelinta otomaatiga ee xargaha gadhka, oo lagu dhejiyo culeyska darbiga (oo leh noocyo lakabka lakabka) dhulka oo faaruq ah.
• Waxyaabaha lagu arki karo ee iskutallaabta ayaa si otomaatig ah loogu dhejiyaa daaqadda iyo kulanka albaabka.
• Qaybta iskutallaabtu waa lagu qaboojin karaa si otomaatig ah iyo gacanta si loo dardar geliyo shaqada naqshadeynta.
• Muuqaalada waa la isticmaali karaa, lagu hayn karaa kooxaha qodobbada iyo taageerada maamulaha mashruuca.
• Awoodda lagu muujiyo qaybta iskutallaabta ee walxaha 3D. Ikhtiyaarka ayaa naafo u ah sida caadiga ah, waxaa laga beddeli karaa daaqadda maareeyaha mashruuca ka dib markuu shido nalalka.
• Agabyada shey kasta waxaa lagu qeexaa astaamahooda.
• U-dhiib fudud (dhaqso iyo fududahay in la isticmaalo) ama horumarsan, oo ay kujirto suurtagalnimada qeexida dhammaan hagaajinta lagama maarmaanka ah (nooca nalka iyo booska, wax yar oo hadhka, iwm).
Method Qaabka cusub ee dibedda lagu bixinayo iyo khariidaynta foornada gudaha).
• Laba wax bixin ayaa lagu xisaabin karaa aragtiyo kala duwan: iftiinka maalinta iyo aragtida habeenkii.
• Daaqadda daaqada ayaa ka madax bannaan barnaamijka ArCADia-ARCHITECTURE, kaas oo kuu oggolaanaya inaad ku sii wadato ka shaqeynta qaabeynta, maadaama aragtida la xisaabiyo.
• Kala-duwanaan badan, oo laga duubayo aragtiyaha kaamarooyinka horay loo sii qeexay.
• Muuqaalka aragtida dhismaha iyada oo metelaysa sidii hal meel ama sawirro laga soo qaaday sida lagu qeexay barnaamijka.
• Awoodda aad u dami karto qalabka kadib diiwaangelinta badan ee metelaysa kaamirooyinka lagu soo bandhigay qaabeynta.
• Falanqaynta iftiinka maalinle ah ee leh taariikhda iyo waqtiga, sidaas oo laga helayo muuqaal maalmihii na daneynayay.
• Cabbiridda otomatiga ah ee qorshaha dabaqa oo dhan waxaa lagu sameeyaa iyadoo la xulanayo xariiqinta cabbiraadda (isugeyn dibedda, banaanka ah waxyaabaha ka-soo-horjeedka, qolalka iyo darbiyada, daaqadaha iyo xarkaha, iyo sidoo kale furitaanka).
• Qiyaasidda waxaa loo xilsaaray ashyaa, oggolaanaya wax ka beddel otomaatik ah ee dhammaan isbeddelada la sameeyay.
• Qaab dhismeedka xagal iyo radial ee darbiyada waa la fulin karaa.
• Yaraynta waxay muujineysaa dhererka darbiga arc.
• Suurtagalnimada gelinta dhererka dhibic ee qorshaha dabaqa iyo iskutallaabta.
• Suurtagalnimada gelitaanka sharraxaadda sheyga (saqafka, sagxadda, darbiga) labadaba qorshaha iyo qeybta iskutallaabta (marka laga reebo kulanka, calanka calaamadinta oo leh liis alaabo ayaa sidoo kale loo heli karaa sheyga la tilmaamay).
Mod Wax ka beddelid dhameystiran ee walxaha liistada ah, ku-daridda iyo kala-goynta walxaha iyo isbeddelada ku yimid alaabada jira.
• Sharaxa otomatiga ah ee qaab dhismeedka santuuqa saqafyada, tirooyinka element ee muujinaya cabirka iyo dhererka transverse ee element.
• Abuuritaan otomaatig ah liisaska alwaax ee loogu tala galay qaababkan sheygan ee la geliyay barnaamijka R3D3-Rama 3D.
• Aagga xisaabaadka iyo awoodda hal-abuurka. Mashaariicda koontada cusub ee sida tooska ah isugu dardarta guud ahaan, saafiga iyo bedka aagga guud iyo sidoo kale sagxadda dhismaha, marka lagu daro mugga dhudhun ah. Xisaabaadka sidoo kale waxaa ku jira aagga ugu yar ee qisada iyo saqafka saqafka: jaranjarada iyo dhererka guuritaanka.
• Akoon cusub oo saqafka saqafka ah, oo dhererkiisu yahay cowska, geesaha, murugada saqafka, geesaha iyo cidhifyada saqafka ayaa sidoo kale lagu dari doonaa, marka laga reebo bixinta loo sameeyo saqafka iyo xisaabinta saqafka saqafka sare.
• Liiska otomatiga ah ee qalabka guryaha saqafka ah oo ay ku jiraan gutter, gutter iyo dhererka tuubbooyinka taayirrada, tirada tuubbooyinka iyo tuubbooyinka xarkaha iyo isku xirayaasha, iyo sidoo kale tirada hoodhadhka iyo ilaalada barafka. Waxaa suurogal ah in la doorto cida xisaabta lagu dari doono.
• Waad u abuurikartaa biil alaab ah saqafka saqafka.
• Liistada agabyada loo isticmaalay ashyaa'da ilaa imminka la adeegsan karo waa la abuuri karaa. Waxaa la tirin karaa tirada gogo ', tusaale ahaan, lebenkii, iyada oo ay suuragal tahay xulashada baakadaha (baakadaha, baakadaha, duubista), suurtagalnimada xulashada waxyaabaha loo liisgareynayo liiska. Waa macquul in la dhoofiyo hal shay liiska ama dhowr waqti isku mid ah hal fayl.
• Liistada xubno ka mid ah baararka la galiyo ayaa la abuuri karaa, labadaba kuwa lagu qeexay qaabeynta iyo kuwa laga keenay barnaamijka 3D R3D3-Rama.
Aasaaska iyo khasaaraha duufaanka:
• Suurtagalnimada in la soo bandhigo sagxad dhulka ku taal iyo calaamad fallaadha woqooyi ku taal qaybta iskutallaabta.
• Nooca cusub wuxuu ka dhigayaa kombuyuutarka ama kombuyuutarradu inay sare u kacaan falanqaynta iftiinka maalinlaha ah, sidaa darteed waa inay isku dubaridaan meesha naqshada ama magaalada lagu sheegay liistada, taas oo mahaddeeda leh soo celinta qoraalka saldhigyada iyo saacadaha la tilmaamay.
• Xiriirka nidaamyada kale:
• Isweydaarsiga xogta ku-wajahan ujeeddooyinka leh barnaamijka Arcon (qaybinta wareejinta walxaha 3D ee lagu qoray maktabadda barnaamijka).
Dhoofinta rakibka naqshadda R3D3-Rama 3D, suurtagal ahaan in lagu wareejiyo dhammaan saqafyada naqshadda isla waqti isku mid ah iyadoo la adeegsanayo dhammaan marinnada qaab-dhismeedka United hal goobeed.
Keenista qaab dhismeedka R3D3-Rama 3D faylka F3D.
FADLAN SI FIIRSO:
Si looga wada shaqeeyo dhamaan qaybaha gaarka ah ee warshadaha shatiga waxaa looga baahan doonaa:
• ArCADia LT ama ArCADia 10 ama ArCADia PLUS 10 ama noocyada softiweerka 'AutoCAD® 2014/2015/2016/2017' kana soo baxa Autodesk.
• Haddii cutub gaar ah oo warshadeed ah lagu rakibo sida kumbuyuutar loogu talagalay barnaamijka 'AutoCAD®', ArCADia AC module ayaa loo baahan yahay.
[cinwaanka soo socota = »ArCADia Mooduladaha Korantada»]
ArCADia BIM - Modules Koronto
ARRIMAHA XULASHADA ARRIMAHA 2
Waa maxay ArcADia-CUDURKA XULASHADA?
ARRIMAHA DHAQAALAHA-KA-QORSHAHA waa qayb-gaar ah oo warshado ah oo ka mid ah nidaamka ArCADia BIM, oo ku saleysan Dhismaha Akhbaarta Modeling Information Ideology (BIM). Barnaamijka waxaa loo isticmaali karaa in lagu abuuro dokumentiyo xirfad-yaqaanno ah ee nidaamka korantada korantada hooseysa ee gudaha. Barnaamijka waxaa loogu talagalay naqshadeeyayaasha nidaamyada korantada iyo qalabka korantada.
Barnaamijka ArcADia-ELECTRICAL INSTALLATIONS wuxuu awood u siinayaa dhaqsaha iyo hufnaanta diyaarinta qorshayaasha nidaamyada korantada iyo iftiinka, iyo sidoo kale waxqabadka xaqiijinta iyo xisaabinta lagama maarmaanka u ah nashqadda.
• CUSUB: suuragalnimada abuurista jaantusyada qaabdhismeedka khadadka korantada ee naqshadeynta nidaamka korantada. Shaxanka shaxanka ah ee khadadka awoodda gudaha ee udhaxeeya wareejinta qaybinta loogu talagalay si fudud ayaa dhaqso loo abuuri karaa.
• CUSUB: Waxaad ku beddeli kartaa muuqaalka astaamaha shay gaar ah. Calaamadaha gaarka-u-gaarka ah ee loogu talagalay walxaha loogu talagalay ayaa si xor ah loo abuuri karaa.
• Sawirrada nidaamyada korantada gudaha waxaa si dhaqso leh looga soo saari karaa qorshooyinka naqshada, laga soo bilaabo meesha ay ku yaalliin meelahan qaybinta, u qoondeynta cutubyada farsamada ee ku habboon, hagaajinta saldhigyada, nalalka korantada iyo fiilooyin si loo xiriiriyo asalka Awoodda korantada ee haysata qalabka guryaha iyadoo la adeegsanayo fiilooyin iyo qalabka wax ku shaqeeya.
Mar alla markii la dejinayo nidaam koronto, barnaamijka waxaa loo isticmaali karaa in lagu xisaabiyo hadda korantada gaagaaban ee suurtagalka ah iyo awoodeeda, culeyska hada socda (1-fo 3-f) iyo kuleylka korantada qeybaha Nidaamka korantada loogu talagalay.
• Barnaamijka waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu abuuro isu dheellitirnaanta awoodda iyada oo loo marayo dukumiinti xirfadle ah oo sharxaya qalabka iyo aaladaha la rakibay.
• Barnaamijka waxaa kaloo loo adeegsan karaa in lagu abuuro liiska agabyada loo adeegsado qaabeynta.
XARUNTA AQOONSIGA EE ARRADia-CULIMADA
Waa maxay QARSAMADA QAAB-DHISMAHA XAQIIQADA ArCADia?
Arkadiyo-KA-QALBIDDA KA-QAADASHADA XUQUUQDA AADANKA waa mashruuc ballaarinta barnaamijka ArcADia-ELERICAL INSTALLATIONS.
Barnaamijka waxaa loogu talagalay qaabeynta tuubbooyinka fiilooyinka, jaranjarada iyo kanaalada fiilooyinka. Waxay kaloo fududaysaa wada xiriirka barnaamijka DIALux, kaas oo loo isticmaalo qaabeynta nalalka.
• Naqshadeynta dariiqyada fiilada.
• Isweydaarsiga macluumaadka ee iftiinka nalalka barnaamijka DIALux.
• Cutubka iyo xisaabinta boqolkiiba isgoyska qaybta buuxinta wadada.
ArCADia-XIDHIIDHKA NATIIJADA 2
Waa maxay ArCADia-POWER NETWORKS?
ArCADia-POWER NETWORKS waa cutub u gaar ah warshadaha ee nidaamka ArCADia BIM, kuna saleysan fikirka Dhismaha Macluumaadka Dhismaha (BIM).
Shabakada 'ArCADia-POWER NETWORKS' waxay u oggolaaneysaa abuurista dokumentiyo xirfad leh oo la xiriira qaabeynta shabakadaha korantada yar ee dibadda. Barnaamijku wuxuu awood u siinayaa abuurista ku-saleysan shayga sawirada aaladaha korantada dibedda ee qorshayaasha horumarinta horumarka ama diyaarinta sawirro adeegsadeyaal muujinaya isku-xir koronto oo ka socda koronto-dhaliye hooseeya una gudbi qeybinta dhismaha.
• CUSUB: jiilka jaantusyada qaabdhismeed ee shabakada laga soo bilaabo isha tamarta ilaa shayga ugu dambeeya. Shaqada ayaa loo adeegsan karaa in si dhakhso leh loogu abuuro jaantus qaabdhismeedka qaab dhismeedka la soo jeediyay, kaas oo looga baahan yahay dukumintiga naqshada. Jaantusku wuxuu ka kooban yahay topolojiyada shabakadda la soo jeediyay.
• CUSUB: Xisaabinta farsamo ee la wanaajiyey iyadoo la soo bandhigayo qodobbada waajibaadka iyo caqabadaha hor-dhaca madaarka gaagaaban ee qaab-dhismeedka "fiilada" fiilada, taasoo u oggolaaneysa in xisaabinta loogu sameeyo xariijinta korantada gudaha ee korantada gaagaaban xiriiriyaha. xadhkaha koronka qaybinta dhismaha iyo sidoo kale xisaabinta awoodda rarka qayb kasta oo shabakadda loogu talagalay.
• CUSUB: Suuragal in la abuuro isku-dubbaridashada sahaminta ee qorshayaasha horumarinta horumarka. Marba marka la calaamadeeyo dhibcaha sahanka, adeegsaduhu wuxuu abuuri karaa warbixin warbixinnada X iyo Y xiriirinta faylka RTF. Hawsha waxay ku imaaneysaa si hagaagsan marka naqshadeeyuhu uu u soo gudbiyo isuduwaha daraasadda ee qodobbada muhimka u ah shabakadda qorsheysan kooxda ansaxinta dukumiintiyada naqshada.
• CUSUB: Sanduuqa fiirsashada ee caadiga ah
• CUSUB: Awoodda lagu beddelo muuqaalka astaamaha shay gaar ah loona abuuro astaamaha isticmaaleyaasha ashyaa loo qorsheeyay.
• Barnaamijku wuxuu u oggolaanayaa abuurista ku-saleysan shayga ee sawirada shabakadaha awoodda dibedda ee qorshooyinka horumarinta bey'ada, iyo sidoo kale diyaarinta sawirada adeegsadaha oo muujinaya shabakad sahay ah oo ka socota koronto-dhaliye hooseeya ilaa qeybinta qeybinta dhisme.
• Abuurista fiilada korantada iyo naqshadeynta hawada hawada.
• Si dhakhso ah oo hufan oo loo diyaariyo qaabeynta koronto isku xira xarumaha dhismaha iyo qaabeynta nalka nalalka dibadda, sida jidadka, wadada, nalalka baarkinada, iwm.
• Khadka korantada kasta ee loogu talagay, adeegsaduhu wuxuu dooran karaa aaladaha kahortagga wareegga gaaban ee suurtagalka ah iyo culeysyada badan ee isticmaalaya maktabadda aaladda ilaalinta ama abuurista ashyaadooda.
• Jiritaanka maktabad qani ku ah walxaha iyo suuragalnimada adeegsadaha inuu abuuro maqaallo u gaar ah.
• Fulinta dhamaan xisaabaadka aasaasiga ah ee shabakad.
• Jiilinta dukumiintiyo farsamo oo xirfad leh iyo warbixin ashyaa loo isticmaalay qaabeynta isbadalkeeda ku xiga.
• Haddii cutub gaar ah oo warshadeed ah lagu rakibo sida kumbuyuutar loogu talagalay barnaamijka 'AutoCAD®', ArCADia AC module ayaa loo baahan yahay
XUQUUQDA KAALMADA SHAQADA 2
Waa maxay XUDUUDBARASHADA ArcADia?
XAQIIQOOYINKA DHAQANKA EE AADADDA 'ArcADia-DISTRIBUTION' waa qeyb qaab-warshadeed u gaar ah nidaamka ArCADia BIM, kuna saleysan fikirka dhismaha ee aragtida (BIM). Barnaamijku wuxuu awood u siinayaa horumarinta dukumiintiyada farsamo ee xirfadeed ee looga baahan yahay soo saarista jaantusyada hal-line-ka ah. Barnaamijka waxaa loogu talagalay labada naqshadeeyayaasha shabakada, korontada iyo nidaamka korantada, iyo sidoo kale dhammaan dadka ka shaqeeya warshadaha injineerka korantada.
Barnaamijka 'ARCADia-DISTRIBUTION BOARDS' waxaa loo isticmaali karaa in lagu abuuro jaantuska aaladda qaybinta loogu talagalay ama jaantus kasta oo wareeg ah oo lagu sameeyo xisaabinta farsamada aasaasiga ah. Maktabada sumadda korantada ee qalabka waxaa loo isticmaali karaa naqshadeynta nidaam koronto. Calaamadaha waa la qori karaa ama lagu qori karaa cabirro farsamo. Marka laga reebo suurtagalnimada in la soo saaro jaantuskii wareeggear qaab wax ku ool ah, barnaamijka waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa in si otomaatig ah loo abuuro jaantus shaashad wareeg ah oo loogu talagalay in lagu xiro ArCADia-ELECTRICAL INSTALLATIONS dul-saar. Isku darka algorithms-ka si loo abuuro jaantusyada wareega ee loo adeegsado barnaamijka iyo astaanta keydka ee aaladaha korantada iyo sidoo kale waxqabadka xisaabinta aasaasiga ah waxay hubineysaa aalad kaamil ah oo lagu sawiro jaantusyada wareegga.
Astaamaha aasaasiga ah iyo howlaha barnaamijka waxaa ka mid ah:
• Sida ugu dhakhsaha badan uguna waxtarka badan ee jaantusyada hal-line shaxanka loogu talagalay is beddelka.
• Suurtagalnimada abuurista nidaamyada xakamaynta.
• Waxqabadka xisaabinta farsamo ee aasaasiga ah (culeyska hadda jira, dhibcaha korantada).
• Jiil otomatiga ah jaantus qeybinta jaantusyada loogu talagalay iyadoo la adeegsanayo qalabka rakibaadda koronto ee ArCADia.
• Diiwaanka macluumaadka qalabka korantada iyo aaladaha.
• Abuurista liisaska tiro-koobidda aaladaha loo adeegsaday qaabeynta.
• Jiil toos ah ee aragtiyaha dhabta ah ee guddiyada qaybinta.
• Suurtagalnimada abuurista aragtida dhabta ah ee guddiga qeybinta iyo ku dhejinta aaladda korantada.
• Jiilinta aragtida hore ee miisaska qaybinta ee lagu abuuray aragtida 3D.
• Xogta cusub ee astaamaha aaladda korantada:
o Cam wuu beddelaa
o Soo noqnoqoshaha isweydaarsiga
ama dharka jilicsan
o Xirmooyinka xiisadda
• Maktabadda la balaadhiyey ee qalabka korantada:
ama Jean Muller
[cinwaanka soo socota = »ArCADia Gas Modules ']
ArCADia BIM - Modules Gas Shidaalka Gaaska
ARRIMAHA GASAHA-GAS 2
Waa maxay ARKADAHA-GAS?
ARIMAHA GUDAHA 'ArCADia-GAS' waa cutub warshadeed u gaar ah oo ka kooban nidaamka ArCADia BIM, kuna saleysan fikirka dhismaha ee aragtida (BIM). Barnaamijka waxaa loo adeegsan karaa abuurista dukumintiga qaabeynta ee gaaska gudaha.
Barnaamijku wuxuu awood u siinayaa abuurista ujeedada ku saleysan shayga ee sawirada nidaamyada gaaska gudaha ee qorshaha dhismaha ee dhismayaasha iyo jiilka shaxanka xisaabinta iyo kordhinta otomatiga ee nidaamka. Maktabadda sheyga waxaa loo isticmaali karaa naqshadeynta nidaamka gaaska. Walxaha waa la beddeli karaa laguna qoondeyn karaa cabbirro farsamo.
Muuqaalka 'ArCADia-GAS INSTALLATIONS' wuxuu qabtaa xisaabinta lagama maarmaanka ah si loo xaqiijiyo naqshada saxda ah ee nidaamka (xaqiijinta dhexroorrada saxda ah ee cabbirka cadaadiska kala duwan ee qalabka gaaska) iyo abuurista warbixin farsamo oo xirfad leh.
Barnaamijka waxaa loogu talagalay shabakadda gaaska iyo naqshadeeyayaasha nidaamka iyo sidoo kale dhammaan shaqsiyaadka ku xiran dhuumaha iyo ku rakibida qeybaha injineerinka bulshada. XIRFADAHA ARCADia-GAS waa qeyb ka mid ah nidaamka loo yaqaan 'ArCADia BIM' kaasoo ka kooban iskaashi ku saabsan qeybaha kala duwan ee warshadaha.
• Diyaarinta qorshayaasha rakibaadda gaaska ee qorshayaasha naqshadaha, laga soo bilaabo meesha santuuqa gaaska, ku meelaynta cabirro farsamo, oo ay ku jiraan cabirrada gaaska, abaabulka aaladaha gaaska, cabbiraadda aaladda iyagoo tilmaamaya wadadda nidaamka gaaska, meesha ay ku xirnaadaan xirida gaaska.
• CUSUB: Qalabka rakibaadda oo ay ku jiraan miiraha gaaska iyo xakameynta cadaadiska.
• CUSUB: Awoodda loogu beddelo xariijin CAD oo caadi ah qaab dhismeedka gaaska ee ArCADia - GAS INSTALLATIONS module.
Go'aaminta baahida gaaska qaabeynta ee loogu talagalay dhisme ay la socoto gaas ka mid ah hantida gubashada, oo ay ku jiraan qodobbada adeegga.
• Waxqabadka xisaabinta guud ahaan culeyska luminta dhammaan marinnada qalabka qalabka gaaska iyo sidoo kale go'aaminta ugu yar iyo cadaadiska ugu sarreeya ee qalabka gaaska.
• Farriimo iyo digniino xaqiijinaya xisaabinta saxda ah iyo nidaamyada gaaska ee loogu talagalay.
• Fulinta jaantusyada xisaabinta dhammaan marinnada gaaska iyo aaladaha, marka lagu daro suurtagalnimada ka dhigista mid aad u macno leh.
• CUSUB: abuurista otomatiga ah ee sawirka horumarinta dhamaan rakibaadda gaaska ama qayb kasta oo ka mid ah. Abuuritaan otomaatig ah oo ah sawirka guud ee 'axonometric' ee dhammaan rakibida gaaska la saadaaliyay ama qayb kasta oo ka mid ah Suurtagalnimada gelinta qalabka tooska ah ee sawirka axonometric oo leh isugeyn toos ah aragtida iyo aragtida guud.
• Abuuritaan otomaatig ah ee qorshaha kordhinta ee nidaamka gaaska ee loogu talagalay.
• CUSUB: Jiil otomatik ah oo ah qalab iskuxirayaal oo kuxiran nooca xiriirada ee meelaha isgoyska iyo dariiqa soo galitaanka, oo ay kujirto suurtagalnimada in wax laga beddelo.
• Soo saarista warbixinnada xisaabinta ee ay ku jiraan khasaaraha gaaska ee qaybaha qaabeynta shaqsiyeed, oo ay kujirto suurtagalnimada in lagu toosinayo jaantusyada qaybta si toos ah miiska xisaabinta iyo otomatiga u beddelashada dhexroor dheellitirka sawirka.
• Abuurista liisaska agabyada diyaarsan.
• Awoodda si dhakhso leh oo fudud loogu keydiyo macluumaadka maktabadda weyn barnaamijka iyo xulo faylalka loo adeegsado qaabeynta nidaamka gaarka ah.
• Muuqaalka 3D ee nidaamka gaaska kaas oo fududaynaya sixitaanka marinka dhuumaha lama arki karo ee qorshaha.
Dhoofinta biilasha qalabka, liisaska sheyga, iyo warbixinnada oo ah qaab RTF (tusaale ahaan, Microsoft Word).
• CUSUB: dhoofinta sharciga biilka ee qaabka CSV (tusaale ahaan, Microsoft Excel) iyo barnaamijka Ceninwest.
AQOONSASHADA ARCADia-EXTERNAL GAS
Waa maxay ArcADia-EXTERNAL GAS INSTALLATIONS?
ARRIMAHA FASAHA-KA-QAADASHADA waa qayb-gaar ah oo warshadeed oo ah nidaamka 'ArCADia BIM', oo ku saleysan fikirka qaab dhismeedka macluumaadka dhismaha (BIM). Barnaamijka waxaa loo adeegsan karaa in lagu soo saaro dokumentiyo xirfad-yaqaan ah oo ku saabsan qaabeynta iskuxirka gaaska, oo ay ku jiraan nidaamka gaaska dibadda.
Barnaamijka waxaa loogu talagalay shabakadaha gaaska iyo naqshadeeyayaasha nidaamka iyo sidoo kale dhammaan shaqsiyaadka ku xiran qaybaha tuubooyinka iyo matoorrada madaniga. Waxaa loo adeegsan karaa abuurista ku-saleysan shayga ee sawirada isku xirnaanta gaaska iyo walxaha ka baxsan ee nidaamka gaaska (oo ku yaal bannaanka dhisme ama koox dhismeyaal ah). Naqshadeynta waxaa lagu fulin karaa qorshooyinka hormarinta nolosha qaab dhismeedka khariidadaha aasaasiga ah ama sawirada adeegsadaha ee matalaya shabakad jira ama la soo jeediyay.
Barnaamijka ArcADia-EXTERNAL GAS INSTALLATIONS wuxuu bixiyaa suurtagalnimada abuurista otomatiga ah ee jaantusyada naqshadaha iyo astaamaha muddada dheer ee marinnada tuubooyinka, oo ay ku jiraan xubnaha nidaamka. Barnaamijku wuxuu xisaabiyaa macluumaadka lagama maarmaanka u ah naqshada saxda ah ee nidaamka iyadoo la tixgalinayo xaqiijinta cabirka dheemanka saxda ah iyo go'aaminta cadaadiska cadaadiska ee qaybaha naqshadeynta.
• Soo saarista sawirada nidaamyada gaaska dibedda ee la xiriira marinnada gaaska gaaska, isku xirka xiritaanka, goobaha iyo cabbirrada santuuqyada gaaska ee taagan-ee-gidaarka iyo darbiga.
• Abuuritaanka astaamaha iyo jaantusyada qaabeynta.
• Go'aaminta qulqulka gaaska qeybo ka mid ah khadadka gaaska dibedda.
• Xisaabinta cadaadiska ayaa ku dhacda khadadka bannaanka ee nidaamka gaaska.
• Xaqiijinta nidaamka gaaska ee loogu talagalay sixitaanka.
• Jiilkii warbixinta naqshada.
• Jiilkii xisaabinta hydraulic.
• Suurtagalnimada dhaqsaha iyo fududaanta xog uruurinta maktabada barnaamijka weyn iyo xulashada faylalka loo adeegsado qaabeynta nidaam gaar ah.
• Jiilka qaansheegadka alaabada loo isticmaalay mashruuca.
U dhoofinta qaansheegyada alaabada barnaamijyada qiyaasta.
[cinwaanka bogga soo socda = »ArCADia Mófulos de Heating]]
ArCADia BIM - Modules Kulul
Waa maxay ArcADia-HEATING INSTALLATIONS?
ARRIMAHA-HEATING INSTALLATIONS waa cutub u gaar ah warshadaha ee nidaamka ArCADia BIM, oo ku saleysan fikirka fikirka Dhisida Macluumaadka Modeling (BIM). Barnaamijku wuxuu u oggolaanayaa abuurista dokumentiyo farsamo oo xirfad leh oo loogu talagalay rakibidda kuleyliyaha laba-weji leh ee dhismayaasha leh teknoolojiyadda BIM. Sidoo kale, waxay u oggolaaneysaa jiilka tooska ah ee aragtida axonometric, liisaska iyo xisaabinta lagama maarmaanka u ah sameynta dukumiintiyada naqshada.
XARUNTA ArcADia-HEATING waa qeyb shirkadeed gaar ah ee nidaamka ArCADia BIM. Barnaamijku wuxuu u oggolaanayaa abuurista dokumentiyo farsamo yaqaan ah oo ku rakibidda kuleyliyaha gudaha ee dhismayaasha. Waxaa loogu talagalay injineerada naqshadeeya tas-hiilaadka fayadhowrka gudaha.
Barnaamijku wuxuu u oggolaanayaa gelinta qaabdhismeedka waxyaabaha sawirada aasaaska dhismayaasha iyada oo la abuurayo qaab isku mid ah qorshooyinka xisaabinta iyo jiilka saddexda nooc ee aragtiyaha isirka. Intaa waxaa sii dheer, waxay u oggolaaneysaa xulashada otomaatiga ah ee xubnaha tixgelinta tixgelinta isticmaaleyaasha (xulashada buugaagta loogu talagalay xulashada xubnaha) iyo jiilka otomatiga ah ama iyada oo loo marayo warbixinnada iyo warbixinnada ashyaa ama walxaha loo isticmaalay mashruuca. Naqshadeynta ayaa lagu fulin karaa aragtida dhismayaasha laga dhex abuuray barnaamijka dhismaha ee ArCADia waxaana lagu fulin karaa jawiga CAD qaab faneed ama feylasha faylalka. Isticmaalaha ayaa adeegsan kara maktabada waxyaabaha loo isticmaalo kuleylka rakibaada, kuwaas oo la ballaarin karo lana waafajin karo baahiyaha isticmaaleysa iyadoo ay kuxiran tahay qalabka loo adeegsaday iyo noocyada qalabka tuubbooyinka. Intaa waxaa sii dheer, waxaa suurtagal ah in la horumariyo shax shakhsi ahaaneed oo leh ikhtiyaar si loo badbaadiyo jaangooyooyinka shaqsi ahaaneed ee shay barnaamij kasta lagana wareejiyo mashruuca.
Barnaamijku wuxuu u oggolaanayaa hubinta saxda ah ee rakibidda loogu talagalay marka la eego aaladaha hydraulics iyo xulashada kaabayaasha.
• Abuuritaanka sawirrada rakibidda kuleylka gudaha, laga soo bilaabo isha kuleylka, illaa mitirka kuleylka iyo tuubooyinka, iyo ku dhammeynta qalabka lagama maarmaanka ah.
• Gelitaanka kuwa kuleylka qaata, tusaale ahaan, gole, jeexjeexa, musqusha ama hiitarka radiyeerka, tuubbooyinka kuleyliyaha, kuleyliyeyaasha iyo unugyada xarkaha.
• Awoodda gelinta dusha kuleyliyaha dushiisa, sida sagxadda ama kuleylka derbiga.
• Galinta xargaha tuubooyinka iyo fiilooyinka qaybinta maktabadda hodanka ah ee tuubooyinka ka sameysan alaabo kala duwan. Suurtagalnimada in isku mar la geliyo dhowr fiilooyin oo isbarbar socda oo leh howlo kala duwan iyo isku xirnaan caqli gal ah.
• Galinta aaladaha iyo aaladda maktabada ballaaran ee wax soo saareyaasha (qaatayaasha, xiritaanka, soo noqoshada, amniga, qalabka dhejinta, qalabka cabirka, miirayaasha, ciriiriga dareeraha, iwm.).
• Dhex gelida noocyo kala duwan oo qalab ah oo leh qaabab gooni ah iyo cabbirro shaqsiyadeed, tusaale ahaan, kuleyliyeyaasha kuleyliya, maraakiibta fidinta.
• Jiil otomatik ah oo ah qalab iskuxiran, oo ay kujirto ikhtiyaarka in wax laga beddelo.
• fududeynta sawirku wuxuu u oggolaanayaa isku xirka deg degga ah iyo fududa ee radiators kala duwan, gelinta joogtada ah ee jidadka qaybaha toosan iyo safka rakibida iyo sidoo kale isbedelka heerka waxyaabo badan oo rakibaada isku mar; gelinta nidaamyada sheyga caadiga ah maktabada barnaamijka.
• Gelinta rakibaadda sharraxan ee deegaanka CAD iyo u beddelidda khadadka tuubooyinka tuubbooyinka (walxaha nidaamka ArCADia BIM).
• Abuuritaanka otomatiga ee tirada dhibicda iyo sharraxaadda rakibaadda iyada oo ikhtiyaarka loo sixi karo. Abuuritaanka shay shaqsiyeed.
• Soo saarista saddex nooc oo aragtiyo madax-bannaan (oo ay kujirto aragtiyo qayb ahaan ah) iyo karti loo yeesho in lagu sameeyo waxyaabaha qarsoon iyadoo la adeegsanayo dhaqaajinta iyo soo gaabin qaybaha hawlgalka gaagaaban; suurtagalnimada gelitaanka xiriiriyaasha xiritaanka tooska ah sawirka axonometric oo leh isugeyn toos ah aragtida iyo liistada.
• Xisaabinta culeyska foosha ee firfircoon iyo qadka toosan iyo khasaaraha cadaadiska gudaha ee dhammaan wareegga, waxay muujineysaa wareegga muhiimka ah.
• Xisaabinta cadaadiska looga baahan yahay rakibaadda iyadoo tixgelin la siinayo xeerka iyadoo la isticmaalayo tuubbooyinka kuleylka.
• Tilmaanta qiimayaasha cabbirrada looga baahan yahay bamka wareega: kor u qaadida iyo waxtarka.
• Hubinta rakibaadda sida ku saxan saxnaanta isku xirnaanta.
• Xulashada otomatiga ah ee tuubooyinka, dahaarka, tuubbooyinka kuleylka, xirmooyinka xiridda, iwm, iyadoo la tixgelinayo xeerarka hadda jira.
• Soo saarista warbixinnada xisaabinta, biilasha qalabka, aaladaha iyo isku xirka isku xirka mashruucan, ee loogu talagalay soo-saarista ku xigta iyo fulinta qiyaasaha qiimeynta iyo qiimeynta maalgashiga (u dhoofinta Ceninwest iyo barnaamijyada caadiga ah).
• Soo saarista liistada qaataha qolalka iyo liisaska iyada oo la tixgalinayo nooca kuleylka iyo awooda qolka la siiyay, oo ay ku jiraan qaab dhismeedka.
• Haddii cutub gaar ah oo warshadeed ah lagu rakibay sida kumbuyuutaro loogu talagalay barnaamijka 'AutoCAD®', markaa ArCADia AC moduleka ayaa loo baahan yahay.
• OS: Windows 10, Windows 8 ama Windows 7
[cinwaanka bogga soo socda = »Muuqaalada Isgaarsiinta ArCADia»]
ArCADia BIM - Modules Isgaarsiinta
ArCADia-FARSAMADA XARUNTA NATIIJADA 2
Waa maxay ArCADia-TELECOMMUNICATIONS NETWORKS?
ArCADia-TELECOMMUNICATIONS NETWORKS waa cutub u gaar ah warshadaha ee nidaamka ArCADia BIM, kuna saleysan fikradaha qaabeeya qaab dhismeedka macluumaadka (BIM).
ArCADia-TELECOMMUNICATIONS NETWORKS waa barnaamij loogu talagalay abuuritaanka dukumiintiyo warshadeed oo xirfad u leh naqshadeynta shabakadaha isgaarsiinta dibadda (fiber optics iyo warbaahinta naxaas ah). Barnaamijka waxaa loogu talagalay naqshadeeyayaasha shabakadda isgaarsiinta dibadda iyo naqshadeynta iyo shirkadaha dhismooyinka soo saara fikradaha shabakadda, sawirrada warshadaha, shabakadaha alaabada jira, iyo sidoo kale dhammaan kuwa ku xiran warshadaha isgaarsiinta.
Tani waa qayb kale oo warshadeed oo ka mid ah nidaamka ArCADia BIM, iyo sida dhammaan cutubyadii hore waxaa loogu shaqeyn karaa sidii dusha sare ee softiweerka AutoCAD. Isticmaalaha kasta ee ArCADia-TELECOMMUNICATIONS NETWORKS wuxuu si dhakhso leh u abuuri karaa sawirro isku xirka shabakadaha isgaarsiinta dibedda ee qorshooyinka horumarinta xayeysiinta ama soo saarista sawirkooda u gaar ah oo muujinaya shabakad jira ama naqshad leh marka la eego qaybaha ay ka kooban tahay.
Sababo la xiriira dabeecadda gaarka ah ee naqshadeynta shabakadda isgaarsiinta dibadda (baahida loo qabo in la dhiso ama la ballaariyo nidaamyada tuubbooyinka tukaha isgaarsiinta aasaasiga ah iyo kuwa sare, tuubbooyinka fiilooyinka, khadadka jira ama kuwa hore loo qorsheeyay, dib-u-dhiska fiilooyinka jira), barnaamijku wuxuu daboolayaa Naqshadeynta fiilooyinka xargaha fiber optic-ka iyo warbaahinta naxaasta ah ee la xiriirta waxyaabaha shabakadaha aan horay loo soo sheegnay. Barnaamijka waxaa loogu talagalay naqshadeeyayaasha shabakadaha isgaarsiinta dibadda. Si kastaba ha noqotee, waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa naqshadeynta iyo shirkadaha dhismaha ee bixiya fikradaha shabakadda isgaarsiinta, soo saarista sawirrada warshadaha, soo uruurinta shabakadaha jira, iyo dhammaan kuwa ku xiran warshadaha isgaarsiinta. Barnaamijku wuxuu bixiyaa liis dhammaystiran oo agabyada aasaasiga ah ee loo adeegsado dhisidda shabakadaha isgaarsiinta, oo ay ku jiraan fiilooyinka iyo marinnada fiilooyinka fiber optic iyo fiilooyinka dhexaadka ah ee xarumaha tas-hiilaadka.
Maktabadda sheyga waxaa loo isticmaali karaa naqshadeynta shabakad isgaarsiineed. Walxaha waa la qori karaa waana la meeleeyn karaa Marka lagu daro suurtagalnimada soo saarista sawirrada iyo jaantusyada wax ku ool ah, barnaamijka wuxuu fuliyaa xisaabinta lagama maarmaanka u ah naqshada saxda ah ee shabakadda. Isku-darka howlaha gaarka ah ee loo adeegsaday codsigan iyo awooda lagu fulinayo xisaabinta iyo xaqiijinta shabakadaha loogu talagalay ayaa bixiya aalad ku habboon abuuritaanka naqshadaha isgaarsiinta isgaarsiinta iyadoo la adeegsanayo fiilooyinka fiber optic iyo fiilooyinka dhexdhexaadka ah.
Barnaamijka ArCADia-TELECOMMUNICATIONS NETWORKS wuxuu awood u siinayaa qaabeynta shabakadaha isgaarsiinta dibedda ee wadada: hal qeyb oo weyn oo qaybinta ah (joojinta xargaha korantada: Jabka qaybinta, gole ka baxsan, sanduuqa fiilada) - hal waddo oo khadka khadka isgaarsiinta - xariir of qaybinta indhaha (joojinta dhamaadka fiilada: xargaha qaybinta, golaha dibedda, sanduuqa fiilada, joojinta fiilada ee dhismayaasha), iyo sidoo kale qaabeynta shabakadda, oo ay ku jirto qaybinta qaybaha qaybaha.
• Naqshadeynta nidaamyada fiilada dhulka hoostiisa iyo sare iyo sidoo kale tuubbooyinka fiilooyinka.
• Naqshadeynta Diyaaradda.
• Naqshadeynta xargaha fiber optic iyo fiilooyin dhexdhexaad ah (oo ay ku jiraan fiilooyinka isgaarsiinta iyo fiilooyinka coaxial) iyadoo la adeegsanayo kaabayaasha isgaarsiinta ee la soo jeediyay ama qeexay.
• Xaqiijinta qaybaha shaqsiyeed ee loo qorsheeyay fiilada, xariijinta fiilada la xushay iyo isku xirka qaybaha ka haray naqshadda.
• Soo saarista warbixinnada xisaabinta, sida falanqaynta indho-indheynta, liistada qaybta fiilada, sharraxa dariiqa fiilada, liistada qaybo ka mid ah nidaamka marinka tuubbada dhexe iyo sare.
• Soo saarista jaantusyada wareejinta fiilooyinka, jaantus guud ee nidaamka marinka fiilada, tuubbooyinka fiilooyinka, liistada qalabka mashruuca ama qalabka la soo xulay.
• Warbixin loogu talagalay shayga la xushay ama koox shay ah.
Dhoofinta sharciga biilka ee barnaamijyada qiyaasta.
Barnaamijku wuxuu siinayaa fursad dhameystiran oo lagu bilaabo oo ku dhammeeyo shaqada meel kasta oo shabakad ah. Sidoo kale, barnaamijka waxaa loo isticmaali karaa oo keliya naqshadeynta nidaamka labajibbaarada tuubbada hore, daloolka fiilada korantada, ama qeyb tuubbada fiilada leh. Sababta oo ah amarka loo baahan yahay ee dhismaha shabakad cusub ama kordhinta shabakad jirta (marka hore, tuubbada fiilada ee nidaamka tuubbada ama tuubbada fiilada waa in la dhisaa, ka dibna, fiilooyinka ayaa lagu dul saari karaa ama la saari karaa dejiso shabakad hawada ah), xaddidaada kaliya ee qaabeynta fiilooyinka isgaarsiinta waa in marka hore la qeexo qaybaha kor ku xusan ee shabakadda. Marka khadadka fiilooyinka ee dibedda ah loogu talagalay qorshayaasha horumarinta baaxadda, naqshadeeyuhu wuxuu si dhakhso leh u heli karaa liiska isuduwaha warbixinta (oo ah qaab warbixin RTF) goobaha dhibcaha shabakadda (dhibcaha xariijinta, godadka godadka) fiiloyin, fiilooyin dusha sare ah, weelka xarkaha). Barnaamijku wuxuu kaloo bixiyaa suurtagalnimada in la sameeyo xisaabinta aasaasiga ah, la soo saaro warbixinno iyo in la xaqiijiyo qaybaha shabakadda loogu talagalay.
SHIRKA ISTICMAALKA ARCADia 2 MINI
Waa maxay ArCADia-TELECOMMUNICATIONS NETWORKS MINI?
ArCADia-TELECOMMUNICATIONS NETWORKS MINI waa cutub gaar ah oo warshadeed oo ka mid ah nidaamka ArCADia BIM, kuna saleysan fikirka qaababka macluumaadka ee dhismaha (BIM).
ArCADia-TELECOMMUNICATIONS NETWORKS MINI waxay awood u siisaa sameynta dukumiintiyada qaabeynta ee shabakadaha isgaarsiinta fiber optic iyo shabakadaha isgaarsiinta naxaasta. Barnaamijkan waxaa ugu horayn loogu talagalay injineeriyada shabakada isgaadhsiinta ee isgaarsiinta dibada iyo qaabeynta iyo qandaraasyada shirkadaha quseeya sameynta fikradaha shabakada, sawiro gaar u ah warshadaha, soo uruurinta alaabada shabakadda jirta iyo sidoo kale dhammaan dadka ka shaqeeya warshadaha isgaarsiinta.
Xaddidnaanta barnaamijka ArCADia-TELECOMMUNICATIONS NETWORKS MINI marka loo eego nooca buuxa waa:
• Amarrada in la soo saaro warbixinnada xisaabinta iyo aragtida aan la heli karin:
-Ka eegis kaamirooyinka fiilooyinka
- Sharaxa guud ee qaybaha aasaasiga ah ee nidaamka bullaacadda
Sharaxa guud ee iskuduwaha dhibcaha topography
-Daqoridda wadada fiilada fiber optic-ga
-Dhaqanka qaybaha fiilooyinka fiber optic-ka
-Faahfaahinta burburka fiilada fiber optic-ga
-Dhaqanka dariiqa fiilada isgaarsiinta
-Baabinta qaybaha fiilooyinka isgaarsiinta
-Fududaynta iyo carqaladaynta falanqaynta xargaha xadhkaha
-Ugu darista liistada liistada guud iyo liisaska isku xiraha qaabdhismeedka: lama hayo
• Khariidaynta qaabdhismeedyada masawirka 3D-ka: lama hayo
• Suurtagalnimada in la ogaado shilalka isku dhaca dhismaha qaab-dhismeedka: lama heli karo.
[cinwaanka bogga soo socda = »Biyo Galinta ArCADia»]
ArCADia BIM - Module Biyo Biyoodyo
ArcADia-BIYAHA QIIMAHA BADBAADADA 2.0
Waa maxay QARSOOYINKA KOOBAN EE AKHRISKA?
ARRIMAHA SUPPLY SUPPLY INSTALLATIONS waa qeyb-u gaar ah warshadaha ee nidaamka ArCADia BIM, kuna saleysan fikirka Dhismaha Modeling (BIM). Barnaamijka waxaa loo adeegsan karaa in lagu abuuro dukumiinti farsamo oo xirfad leh ee nidaamka biyaha gudaha ah ee dhismaha ah. Barnaamijka waxaa loogu talagalay naqshadeeyayaasha nidaamka bulaacadaha gudaha.
Barnaamijku wuxuu awood u siinayaa galinta ashyaa ku-saleysan walxaha sawirada sawirada asalka, oo ay ku jiraan abuurista jaantusyada naqshada iyo jiilka seddex nooc oo saadaal ah. Intaa waxaa sii dheer, barnaamijka wuxuu oggolaanayaa xulashada otomaatiga ah ee xubnaha, iyada oo la tixgelinayo doorbidyada isticmaaleyaasha (cunsurrada waxaa laga soo xushay buugyaraha) iyo sidoo kale jiilka otomatiga ah ee warbixinnada iyo soo-saareynta ashyaa ama walxaha loo isticmaalay qaabeynta. Nidaamyada bixinta biyaha waxaa lagu qaabayn karaa qorshooyinka dhismaha ee lagu soo saaray barnaamijka 'ArCADia-ARCHITECTURE' waxaana loogu talagalay in lagu sameeyo jawiga CAD qaab bitmaps ama faylalka faylka. Isticmaalaha ayaa adeegsan kara maktabada waxyaabaha loo isticmaalo nidaamyada biyaha, kuwaas oo la ballaadhin karo lana waafajin karo baahiyahooda ku saabsan mashiinnada la isticmaalo iyo noocyada qalabka tuubbooyinka. Moodeel adeegsade ayaa waliba loo diyaarin karaa, oo ay kujirto awoodda lagu keydiyo jaangooyooyinka caadiga ah ee shay kasta oo barnaamij lagana wareejiyo iyada oo ay la socoto qaabeyn.
Barnaamijka waxaa loo adeegsan karaa in lagu xaqiijiyo nidaam loo habeeyay marka la eego qalabka biyo-ku-haynta iyo xulashada qalabka.
• Sawirrada nidaamka biyaha gudaha ah waxaa laga xaqiijiyey barta isku xirka, unugga qaadashada biyaha iyo tuubbooyinka aaladda lagama maarmaanka u ah.
• Meelaha biyuhu ka baxaan iyo dariiqooyinka bixinta biyaha ayaa la calaamadeeyay.
• Sare u qaadida iyo tuubooyinka qaybinta biyaha ayaa laga soo xushay maktabadda ballaaran ee tuubooyinka ka sameysan alaabo kala duwan. Dhowr dhuumaha isbarbar socda oo leh howlo kala duwan ayaa la wada ordi karaa isla mar ahaantaana isku xiran.
• Qalabka wax lagu xiro iyo aaladda waxaa laga soo qaatay maktabadda guud ee soo-saaraha (tuubooyinka biyaha, joogsiga iyo hubinta weelasha, amniga, dabka iyo qalabka xakameynta, aaladaha mitirka, miirayaasha, ku-darka).
• Galinta noocyo kala duwan oo qalab ah oo leh qaabab gooni ah iyo cabirro shaqsiyadeed (aaladaha loogu talagalay diyaarinta udub-dhexaadka biyaha kulul ee guriga, kululeeyeyaasha biyaha iyo kuwa xoojiya cadaadiska).
• Jiil otomatik ah oo ka kooban qaybo iskuxirayaal ah, oo ay ku jiraan suurtagalnimada in wax laga beddelo.
• Qalabka sawirku wuxuu u oggolaanayaa isku xirka deg-degga ah ee fudud ee taxanaha biyaha, gelinta joogtada ah ee wadooyinka qaybta toosan iyo jidadka toosan, iyo sidoo kale dib-u-habeynta tiro ka mid ah heerarka nidaamka isla waqti isku mid ah, keydinta nidaamyada walxaha caadiga ah, iyo sidoo kale kulminta mitirka biyaha ee maktabada barnaamijka.
• Gelitaanka nidaam la soo jiitay bay'ada CAD iyo u beddelashada khadadka tuubooyin tuubooyin (walxaha nidaamka ArCADia).
• Abuuritaanka otomatiga tirada dhibcaha iyo sharraxaadooda, oo ay kujirto suurtagalnimada tafatirka. Abuuritaanka tusaalayaasha adeegsadaha.
• Jiilinta saddexda nooc ee axonometry (sidoo kale waa qeyb) iyo suurtagalnimada in lagu sameeyo waxbadan oo la fahmi karo iyadoo la magdhabayo oo la soo gaabiyo qeyb ka mid ah hawlgalka kooban. Suurtagalnimada gelinta xargaha joogsiga tooska ah ee sawirka axonometric, oo ay kujirto tixgelinta otomaatig ah ee qorshaha iyo liistada.
• Xisaabinta wadarta iyo qeyb ka mid ah khasaarooyinka cadaadiska ee dhammaan ama qaar ka mid ah wadiiqooyinka socodka biyaha ee la xushay iyo sidoo kale xulashada barta qaybinta ugu yar ee ugu wanaagsan ee deegaanka.
• Xisaabinta luminta kuleylka iyo luminta cadaadiska nidaamka wareegga, oo ay ku jiraan suurtagalnimada go'aaminta cabbirrada loo baahan yahay madaxa gaarsiinta iyo awoodda bambooyinka wareegga.
• Oggolaanshaha xaaladaha hydraulic-ka ee xisaabinta nidaam ay ku jiraan haanta biyaha loo adeegsado dagaalka dabka.
• Xaqiijinta nidaam loogu talagalay xiriirada saxda ah.
• Xulashada otomatiga ah ee walxaha nidaamka, u oggolaanaya qawaaniinta hadda jira.
• Jiilka warbixinta xisaabaadka, biilasha qalabka, qalabka iyo waxyaabaha iskuxirka la xiriira waxaa lagu daray qaabeynta isbadelka xiga.
Rakibidda ArCADia-SEWAGE 2
Waa maxay ArcADia-SEWAGE INSTALLATIONS?
ARRIMAHA-SEWAGE INSTALLATIONS waa cutub warshadeed u gaar ah nidaamka ArCADia BIM, kuna saleysan fikirka Dhismaha Macluumaadka Dhismaha (BIM). Barnaamijka waxaa loo isticmaali karaa in lagu abuuro dukumiinti xirfadle ah oo naqshadeynta naqshadeynta naqshadeynta naqshadaha naqshada naqshada. Barnaamijka waxaa loogu talagalay naqshadeeyayaasha nidaamka bulaacadaha gudaha.
ARRIMAHA-SEWAGE INSTALLATIONS waxay u oggolaaneysaa galinta ashyaa ku jihaysan ee walxaha sawirada sawirada qaab dhismeedka, oo ay kujirto sameynta jaantusyo naqshadeyn iyo abuurida fidinta iyo muuqaallada. Isticmaalaha ayaa dejin kara nidaamka bullaacadaha marka loo eego biyaha wasakhda ah: cawlan iyo biyo madoow, biyaha roobka (meelaha loogu talagalay meelaha tuubooyinka ka baxaan dhismayaasha ama marka ay daruuri tahay in tuubbooyinka bannaanka laga dhigo dabaqa dhismaha ) iyo habka biyaha wasakhda ah. Sawirrada qorsheynta waxaa loo soo saari karaa sawiro sooyaal qaab dhismeedka qaab dhismeedka vector ama faylalka bitmap-ka.
Isticmaalaha ayaa adeegsan kara maktabadda waxyaabaha ka mid ah nidaamyada bullaacadaha, kuwaas oo la ballaadhin karo laguna waafajin karo baahiyaha isticmaalaha ee la xiriira aaladda aaladda loo adeegsado iyo noocyada qalabka tuubbooyinka. Qaabeynta ayaa sidoo kale loo diyaarin karaa, oo ay kujirto awoodda lagu keydiyo jaangooyooyinkii caadiga ahaa ee shay barnaamij kasta oo lagu wareejiyo iyada oo ay weheliso qaabeyn u dhexeysa goobo shaqo oo badan.
Bilowgiiba, adeegsaduhu wuxuu raadiyaa soo-kiciyaasha koox qaataha ah, oo ay kujirto awoodda lagu heli karo barokac (dhulka hoostiisa) hawo-mareenka iyo hababka isku xirnaanta toosan. Si tan loo sameeyo, gal dhumucda dabaqa iyo dhererka heerka (ArCADia-ARCHITECTURE geometry data xogta si otomaatig ah ayaa loo soo saari doonaa).
Isku xirnaanta aaladda aaladda kiciyeyaasha waa la qaabayn karaa oo xamuul dareeraha ah ayaa lagu qeexi karaa iyada oo lagu saleynayo, taas oo iyana oggolaaneysa dhexroorka halista in la go'aamiyo. Barnaamijku wuxuu u oggolaanayaa qeexidda shay ku jira qaybaha sagxadda iyo tooska ah: Fallaarno, furitaanno daaqado, qolal marinno, marooyin duullimaadyo ah iyo daahyo hoos u dhacaya.
Qeyb / dhammeystiran nidaamka dheeriga ah waxaa lagu soo saaraa iyada oo lagu saleynayo xogta dhowr aaladood oo ku xiran halista iyo nidaamka dheecaanka.
Barnaamijku wuxuu soo saaraa muuqaallo wajiga dheer ee nidaamka ku saleysan jaangooyooyin la aasaasay, dhexroor go'aamiya, iyo xogta lugta xarigga iyo walxaha kale. Halbeegyada shaqsiyeed, tusaale ahaan dhexroor, waxaa lagu sii sharixi karaa astaamaha la soo saaray, kaas oo loo qaddarin doono qaabka guud ee nidaamka bulaacadaha.
• Galinta marinnada marinnada marinka nidaamka biyo mareenka, oo ay kujirto unug la aasaasay, oo ka bilaabmaya meesha daadku ka soo baxayo oo leh kaameero kormeer ilaa aaladaha nadaafadda, kuna xisaabtama noocyada biyuhu ka baxaan.
• Galinta meelaha dhibcaha ka soo baxa, xirashada, Cleanouts iyo gelinta otomatiga ee Cleanouts heerka tuubbada. U qoondeynta xogta astaamaha.
• Galinta tuubooyinka, oo ay ku jiraan kala-soocidda otomaatiga ee bullaacadaha, tuubbooyinka iyo isku-xiridda nalka, maktabad ballaaran oo agab ah.
• Jiilka otomatiga ah ee gogosha isku xirka, oo ay kujirto suurtagalnimada wax ka badalista iyo ka tarjuma qodobadaas dhammaan sawiro.
• Sawirada aaladaha u oggolaanaya hab dhaqso ah oo fudud oo ay ku abuuri karaan isku xirno dhowr tuubbo isku waqti ah, taas oo ku xirnaaneysa habka isku xirnaanta iyo isuduwaha adeegsiga is ẹya-galka. Xulashada isku xidhka tuubooyinka ka sameysan nalalka iftiinka iyo wiishashka ee buugaagta ee soosaarayaal fara badan.
• Galinta joogtada ah ee jidadka toosan iyo jiifa ee qaybaha nidaamka, isla mar ahaantaana isku beddelanaya heerar tiro ka mid ah qaybaha nidaamka isku waqti. Waxyaabaha nidaamka caadiga ah waxaa lagu keydin karaa maktabada barnaamijka.
• Abuuritaanka otomatiga ee tirada dhibicda iyo sharraxaadda nidaamka, oo ay kujirto awoodda wax lagu saxayo loona abuuro tusaalooyin adeegsade.
• Jiil qumman oo dhammaystiran oo isugeyn ah: bullaacadaha, wiishashka, isku xirka nalalka, oo ay ku jiraan rakibaadda iyo aaladda nidaamka bullaacadda. Suurtagalnimada in wax laga beddelo oo wax laga beddelo walxaha laga dheereeyo heerka diyaaradda fidsan. Soo gaabinida jidadka qulqulka dheer iyo waddo iswada oo ah qulqulka diyaaradda si sawirku u noqdo mid la fahmi karo.
• Jiil otomatik ah ee tuubooyinka tuubooyinka tuubbooyinka iyo astaamaha toosan, oo ay ku jiraan isku dhacyada nidaamyada kale ee nidaamyada nidaamka ArCADia. Tixgalinta isku xirida walxaha iyo isku xirnaanta.
• Xisaabinta qulqulka qulqulka qaybta, buuxinta heerarka iyo xawaaraha. Go'aaminta dhexroor ka mid ah qaybta biyuhu ka baxaan, tuubooyinka toosan, tuubooyinka bullaacadda qaada iyo kuwa gorgorrada leh.
• Muuqaal 3D ah oo ku saabsan nidaamka gaaska oo sahla in la saxo marinka dhuumaha aan la arki karin ee qorshaha.
• Xaqiijinta nidaam loogu talagalay iskuxirka saxda ah iyo hab la fahmi karo ee lagu ogaanayo iyo sixitaanka qaladaadka u saamaxaya kala-sooc deg deg ah qaybaha iyo goobahooda.
• Jiilka warbixinta xisaabinta, biilasha qalabka, aaladaha iyo waxyaabaha iskuxiran ee lagu soo daray qaabeynta isbadelka xiga.
• ArCADia LT ama ArCADia 10 ama ArCADia PLUS 10 ama barnaamijka AutoCAD® ee loogu talagalay noocyada Autodesk 2014/2015/2016/2017.
[cinwaanka bogga soo socda = »ArCADia Modulado Dheeraad ah]]
ArCADia BIM - Module dheeraad ah
Waa maxay RAYDHAHA ArCADia-ESCAPE?
ArCADia-ESCAPE ROUTES waa moodeel u gaar ah warshadaha ee nidaamka ArCADia BIM, oo ku saleysan fikirka fikradihiisa u qaabeeya macluumaadka dhisme (BIM). Barnaamijka waxaa loo adeegsan karaa in lagu abuuro shabakad jidad looga guuro dhismayaasha. Khadadka daadguraynta ayaa la arki karaa oo lagu daabaci karaa cabbiro ku xiran baahiyaha adeegsadaha. Barnaamijka waxaa loogu talagalay injineerada, naqshadeeyayaasha iyo wax dhisayaasha ama dadka mas'uulka ka ah dayactirka dhismayaasha adeegga dadweynaha.
Barnaamijku waa qayb dheeraad ah oo ah barnaamijka ArCADia-START wuxuuna fidiyaa howlaheeda iyada oo la adeegsanayo astaamaha lagama maarmaanka u ah abuuridda khariidado guuritaan xirfad leh.
Adeegga ArCADia-ESCAPE ROUTES wuxuu si dhaqso leh u abuuri karaa qorshooyin dhisme, oo ay kujirto aragtida waddooyinka daadguraynta.
Qorshayaashaani waa inay ahaadaan kuwo laga heli karo dhismayaasha adeegga dadweynaha (hoteelada, suuqyada wax laga iibsado, iwm.) Si loogu caawiyo dadka gudaha ku sugan inay si dhakhso leh u helaan marinka ugu dhakhsaha badan ee looga baxo dhismaha haddii dab ama wax kale jiraan. xaalad deg deg ah. Isticmaalaha ayaa abuuri kara khariidado daadgureyn oo ku saleysan dhismayaasha jira iyo qorshayaasha horumarineed ee duleed (qaababka: DWG, IFC, DXF) ama sameysan karaan sawirro iyaga u gaar ah oo matalaya aag gaar ah iyadoo la adeegsanayo aaladda nidaamka ArCADia.
Barnaamijku wuxuu bixiyaa astaamo iyo maktabad miis loogu talagalay kahortagga iyo daadgureynta haddii dab kaco. Maktabada waxa ku jira waa la qori karaa.
Dadka kale, ArCADia-ESCAPE ROUTES waxaa loo isticmaali karaa:
• Abuurista oo daabac khariidadaha daadguraynta oo ku saleysan saadaasha laga soo saaray ArCADia,
• Abuurista oo daabac khariidadaha daadguraynta iyadoo lagu saleynayo saadaasha laga soosaaray barnaamijyada kale (qaababka: DWG, DXF, IFC),
• si otomaatig ah u abuuri kara qoraallo, ay kujirto sharraxaadda xarumaha iyo astaamaha loo adeegsaday,
• Isbarbar dhig khariidadda daadguurka oo la arkay.
Barnaamijku wuxuu ka kooban yahay:
• maktabadda astaamaha diyaarka ah iyo goleyaal buuxiya heerarka warshadaha,
• howlo sahlan oo dareen leh oo loo adeegsado midabka marinnada,
Miisaska diyaarsanaanta, oo ay ku jiraan hanaannada dabka ama shilalka,
Hawlaha dareenka ee midabaynta meelaha daadguraynta,
Hawlaha otomatiga ah ee lagu calaamadiyo wadooyinka daadguraynta,
• calaamadaha, midabbada iyo astaamaha kale ee barnaamijka waxay waafaqsan yihiin heerka Yurub ee ISO 23601 oo la xoojiyey.
Waa maxay sababta ay ugu habboon tahay iibsashada RAROONKA ArCADia-ESCAPE?
• Software gaar ah, oo aan lahayn dhigeeda suuqa Polish.
• Waxaa lagu balaadhin karaa cutubyo naqshadeeya warshadaha kale ee dhismaha.
• Marka lagu daro barnaamijka 'ArCADia-START', waa deegaan jaantusyo buuxa ku shaqeeya oo naqshadeeya naqshadeynta kumbuyuutarka iyo taakuleynta qaabka DWG, kaas oo la jaan qaada barnaamijka AutoCAD.
Barnaamijku wuxuu u shaqeyn karaa sidii kabid loogu talagalay barnaamijka 'AutoCAD 2011/2012/2013' 32- / 64-bit software.
Waa maxay ArCADia-SURVEYOR?
ArCADia-SURVEYOR waa cutub u gaar ah warshadaha ee nidaamka ArCADia BIM, oo ku saleysan fikirka Dhismaha Macluumaadka Dhismaha (BIM).
Barnaamijku wuxuu taageeraa diyaarinta dukumintiga farsamada ee qorshayaasha alaabada iyo qaybta iskutallaabta, sida alaabada dhismaha iyo warbixinta la abuuray. ArCADia-SURVEYOR waxay awood u siineysaa xog aruurinta wirelesska qalabka qalabka cabirka elektiroonigga ah iyadoo la adeegsanayo tikniyoolajiyadda Bluetooth iyo gelinta tooska ah ee nidaamka ArCADia BIM. Si aad uga faa iideysato barnaamijka, waxaad u baahan tahay kumbuyuutar PC iyo mitir masaafad leh oo leh tikniyoolajiyadda Bluetooth, maadaama ay u oggolaaneyso gudbinta bilaa-waayirka xogta iyo natiijooyinka, maadaama cabbiraadaha la qaadayo.
ArCADia-SURVEYOR waxay la shaqeysaa aaladaha cabirka elektiroonigga ah:
• Leica DISTO D510 BT (kaliya loogu talagalay Windows 8,1 iyo Windows 10!)
• Leica DISTO D810 BT (kaliya loogu talagalay Windows 8,1 iyo Windows 10!)
• Bosch: 100C GLM xirfadle.
Maxay ugu habboon tahay iibsashada ArCADia-SURVEYOR?
• Sawirrada 3D ee qolalka waxaa loo diyaarin karaa iyadoo lagu saleynayo xogta laga soo ururiyey aaladaha cabbira elektiroonigga oo ku qalabaysan tikniyoolajiyadda Bluetooth:
ama Leica DISTO A6,
ama Leica DISTO D3a BT,
o Bosch: 100C GLM xirfadle.
• Si toos ah uga shaqee barnaamijka CAD sawir ku sawiran qaab DWG ah, oo ay kujirto awoodda lagu saxayo isla markiiba.
Barnaamijku wuxuu leeyahay xal hal-abuur leh oo leh xuquuqda daabacan, kaas oo si fudud isugu daraya qolalka cabbir iyo mitir dhammaan qorshayaasha heer-goob.
• Iyada oo ay weheliso barnaamijka 'ArCADia-START', barnaamijka wuxuu bixiyaa jawi muuqaal leh oo CAD ah oo shaqaynaya, kaasoo awood u siinaya diyaarinta sawirrada qaab DWG, sidoo kale iyadoon lahayn mitir masaafo ah.
[cinwaanka bogga soo socda = »ArCADia Construcción»]
ArCADia BIM - Dhismaha Mootooyinka
ArCADia-REINFORCED CONCRETE KOLKA
ArCADia-REINFORCED CONCRETE COLUMN waa cutub u gaar ah warshadaha ee nidaamka ArCADia BIM, kuna saleysan fikirka dhismaha ee aragtida (BIM). Codsiga waxaa loogu talagalay naqshadeeyayaasha qaab dhismeedka waxaana loogu talagalay in lagu taageero isticmaaleyaasha inta ugu badan inta lagu gudajiro hormarinta qorshayaasha la taaban karo ee la taaban karo ee barnaamijyada CAD.
ArCADia-REINFORCED CONCRETE COLUMN waa dalab ku saleysan shay oo adeegsanaya xogta 2D ee uu isticmaaley isticmaalaha (qaab aragtida iyo qeybaha) si loo soo saaro moodal xoojin 3D ah oo si xor ah wax looga badali karo oo u ogolaanaya, tusaale ahaan, abuurista ee qaybaha cusub. Xoojinta maadada loogu talagalay codsigan waxay la jaan qaadeysaa shuruudaha EN 1992-1-1 Eurocode 2: Sebtembar 2008. Codsigu wuxuu u oggolaanayaa naqshadeeye inuu galo macluumaadka xoojinta gacanta isla markaana wuxuu xogtani toos uga qaataa codsiyada xisaabinta. : Muuqaalka EuroFerroConcrete ee R3D3 3D Frame iyo R2D2 2D Frame software, iyo qeybta la taaban karo ee la taaban karo ee PN-EN ee nidaamka dhismaha. Waxaa kale oo suuragal ah in nuqul laga sameeyo khaanadda la xushay, oo horeyba looga soo dhammaystiray isla faylka ama kii hore loo diyaariyey.
• Awoodda qaabeynta tiirar badan oo hal fayl gudaheeda ah.
• Awoodda abuurista feyl cusub adoo ka duulaya tiirarka dhammaaday ee sawirada horey loo soo dhameystiray ama adigoo ku duubaya tiirarka isla faylka.
• Awoodda qaabeynta joomatari iyo xoojinta sheyga laba ama afar aragtiyood oo aasaasi ah iyo tiro aan kala sooc lahayn oo ka mid ah qaybaha tirade.
• Xakameyn buuxda oo ku saabsan aragtida sawirka iyo daabacaadda aragtida iyo qeybaha ay ka mid yihiin waxyaabaha ay ka kooban yihiin, iyo sidoo kale suuragalnimada isku beddelka inta u dhexeysa iyaga oo la shaqeynaya tusaalaha.
• Dhaqdhaqaaq aan xadidneyn iyo isku-darka qaybaha cusub ee tiirka.
• Awoodda abuurista ku dhowaad nooc kasta oo ka mid ah qaybta tiirarka: afar geesle, wareegsan, xagal ah, T-qaab ah, C-ቅርጽ ah, Z-qaab ah iyo I-qaab leh oo leh astaamaha ku dheggan dusha sare ee column : isgoysyada heerka sare ah iyo tiirarka ama isbaarooyinka gaaraan dhererkooda.
• Marka la eego tiirarka qaybta afar geeska ah, ka taageer abuurista otomaatig ah ee xoojinta dhererka leh ikhtiyaarka isku laabashada otomatiga ah ee isgoysyada ama galinta safka sare.
• Abuuritaan otomaatig ah oo sadar alwaax ah oo lagu xoojinayo isu beddelka qaab laba iyo afarta lugood ah, oo loo qaybiyey aagagga uu isticmaaley.
• Abuuritaan otomaatig ah oo xoojisa qormooyinka xoojinta transverse ee qaababka qaybaha kale.
• Beddelidda jihada jihada-afarta lugood ku dhex jirta qaybta tiirka.
• Cabbirka xoojinta ee laga heli karo cutubyo milimitir (mm) ama cm ah, oo leh saxsanaan lagu hagaajin karo.
• Baahida loo leexiyay radii ee baararka ayaa si otomaatig ah loo tixgeliyaa.
• Dhererka xargaha arịrada toosan waxaa si otomaatig ah loo tixgeliyaa markii ay fooraraan isgoysyada oo lagu dhejiyo safka sare, marka la eego leydi iyo alwaax wareega.
• Daboolida xoojiyaha mudada dheer iyo isugeynta ee loo qeybiyay qeybta xoojinta si toos ah ayaa loo tixgeliyaa.
• Awoodda qaabeynta baararka bilaashka ah.
• Qaabka iyo astaamaha barta xoojintu waa la qori karaa.
• Qalabka tafatirka ayaa u oggolaanaya xoojinta in si xor ah looga helo aragtida iyo qeybta element.
• Soosaaridda otomatiga ee baararka iyada oo lagu daro cabirkooda iyo sharraxaadooda (faahfaahinta baararka).
• Sharaxaada dib-u-xoojinta ayaa lagu meeleeyn karaa meel kasta oo ka mid ah aragtiyaha iyo qaybaha walxaha.
• Lambarka si otomaatig ah iyo lambarro isugeyn ah oo weel kasta gudahood hal fayl ah.
• Joometriyada cabbirka ee sadarka ayaa si madaxbanaan wax looga beddeli karaa.
• Abuuritaan otomaatig ah iyo wax ka badalista liistada birta xoojinta ee ku saleysan moodhalka xoojinta la abuuray (liistada dabooleysa hal shey ama sawirka oo dhan).
• Jiil otomatik ah oo ah qaabka tiirarka xoojisan ee ku saleysan xisaabinta lagu sameeyay mowjadaha EuroFerroConcrete ee R3D3 3D Frame iyo R2D2 2D Frame Application iyo sadarka la taaban karo ee la xoojiyay ee moduleka PN-EN ee barnaamijka Dhismaha.
• Muuqaalka 3D ee qaabka xoojinta tiirarka la soo saaray.
Waa maxay ArCADia-REINFORCED CONCRETE SLAB?
ARCADia-REINFORCED CONCRETE SLAB waa cutub u gaar ah warshadaha ee nidaamka ArCADia BIM, kuna saleysan fikirka dhismaha ee aragtida (BIM).
Barnaamijka waxaa loogu talagalay injineerada dhismaha. Ujeedada dalabka ayaa ah in la bixiyo taageerada ugu badan ee adeegsadaha si loo soo saaro sawirro qaabdhismeed oo faahfaahsan oo dharbaaxo la taaban karo oo la xoojiyay ee barnaamijka CAD.
ArCADia-REINFORCED CONCRETE SLAB waa barnaamij qaab dhismeed ah, oo abuuraya hannaan ku saabsan xoojinta slab, wuxuu saamaxayaa tafatirka soo socda iyo, tusaale ahaan, abuurka otomaatiga ah ee qeybaha cusub ee isweydaarsiga, oo ku saleysan xogta uu isticmaaley, gudaha Qaabka aragtida taargooyinka xoojinta sare iyo kan hoose ee loo yaqaan 'slab' iyo qaybaha iskutallaabtu ee sheyga. Samaynta taarikada xoojinta dharbaaxada ee barnaamijka waxaa suurtogal ah iyadoo lagu saleynayo tilmaamaha lagu qeexay PN-EN 1992-1-1 Eurocode 2: Sebtember 2008. Barnaamijkani wuxuu u oggolaanayaa xogta ku saabsan qaabka iyo taageerada dhagxaanta ee injineerka naqshadeeya wuxuuna qaadaa xogta ku saabsan qaabka iyo taageerada dhagxaanta tooska uga socota barnaamijka ArCADia-ARCHITECTURE ee ku saleysan saqafka la aasaasay. Habka loo yaqaan 'ArCADia-ARCHITECTURE' ee loo yaqaan 'ArCADia-ARCHITECTURE' wuxuu ka kooban yahay saqafyo fara badan, dhammaan saqafyada kadib xulashadaada waxaa loo wareejiyaa barnaamijka 'ArCADia-REINFORCED CONCRETE SLAB' oo ah noocyo gooni ah oo gogosha la taaban karo ee la xoojiyay.
Barnaamijka 'ArcADia-REINFORCED CONCRETE SLAB' waxaa ku jira astaamaha iyo awoodaha soo socda:
• Awoodda qaabeynta gogosha badan oo dukumintiga ku jira.
• Suurtagalnimada wareejinta saqafka oo ay ku jiraan shuruudo taageeradooda oo laga soo qaaday qaabka dhismaha barnaamijka ArCADia-ARCHITECTURE.
• Awoodda lagu dhisayo joomatari iyo taarikada xoojinta slab labo qodob oo waaweyn oo muuqaal ah oo lagu qeexay si gaar ah taargooyinka xoojinta sare iyo kuwa hoose, iyo sidoo kale lambar kasta oo ka mid ah qeybaha isugeynta ee loo yaqaan slab.
• Xakameyn buuxda ee sawirka aragtida iyo daabacaadda aragtida iyo qeybaha iskutallaabta iyo qeybaha ay ka kooban yihiin, iyo sidoo kale awoodda isweydaarsiga dhexdooda marka la shaqeynayo mashiinka.
• Digniin bilaash ah iyo isku-darka qaybaha iskudhafka jeexitaanka cusub, iyo sidoo kale xoojinta qaybta dib-u-xoojinta qaybta dib-u-habeynta.
• Awoodda si xor ah loogu daydo isbadallada daahyada iyo taageerooyinkiisa sida derbiyada, tiirarka iyo kala-goysyada, iyo sidoo kale soo bandhigista furitaanka qaab kasta oo guntiga la naqshadeeyay.
• Ku darista otomatiga ee geesaha xoojinta qaab-dhismeedka qaab kasta oo jeex jeexan ama qayb ka mid ah iyada oo la dayactirayo xoojinta labis ama isku-beddelidda shabaqa labada dhinacba, iyo sidoo kale dayactirka xargaha toosan (kor iyo hoos). daboolka dhinaca ee dhammaan baararka.
• Ku darista otomatiga muraayadaha xoojinta afar geeska loogu tala galay isticmaalaha lagu qeexay gudaha sagxada qaab ama qaab kale.
• Awood u leh in aad nuqul ka sameysatid shaxanka qeexan ee aagga sare iyo kan hoose, iyo sidoo kale inta udhaxeysa sagxyadaan.
• Awoodda u leexinta baararka laga soo bilaabo garka sare ilaa garka hoose.
• Awoodda gelitaanka cufnaanta joogtada ah ee labada dhinacba ee aaggii la xushay ee korantada la siiyay isla markaana abuuraya koobi.
• Awoodda gelinta goynta qaab kasta oo kujira grid-ka caadiga ah, iyadoon loo eegaynin furitaanka shaashadu.
• Awoodda wax ka beddelka dariiqa korantada iyo jihada baararka ugu weyn iyo kuwa sare ee giriidka, iyo sidoo kale awoodda lagu saarayo gridda baararka shaqsiyadeed (wixii xisaab ah ee ku jira grid-ka ayaa laga saarayaa iyada oo laga qaadayo).
• Suurtagalnimada in lagu daro baararka shaqsiyadeed ee xariiqda jihada weyn ama sare (samaynta xayndaabka korantada illaa dib loo dhiso).
• Awoodda aad ku nuqul karto baararka xarkaha (oo ah baararka aan laga qaadi karin dib-u-habeyntiisa).
• Awooda wax ka badalka dhererka baararka hal grid (ilaa tan dib loo dhiso).
• Awoodda lagu wareejiyo gebi ahaan baararka baararka ku jira dariiqa iyo dayactirkooda kadib dib-u-dhiskeeda lagu sameeyay (iyada oo aan laga saarin grid-ka).
• Si otomaatig ah uga saarida qaybinta baararka shabakada xad-dhaafka ah ee ku saleysan gabi ahaanba aagga taageerada slab (darbiyada iyo kala goysyada).
• Suurtagalnimada sameynta aaladaha qoditaanka toosan ee aagga taakuleynta toosaha ee tiirarka.
• Ku darista otomatiga ah ee xoojinta birta qaybinta joogtada ah ee miisaska taageerada gridda sare.
• Cabbirka xoojinta ee milimitir ama santimitir leh awooda lagu dejiyo saxda.
• Kordhinta otomatiga ah ee loo baahan yahay ee looxaya ee foosha xoojinta.
• Awoodda abuurista rebar qaab kasta.
• Suurtagalnimada in wax laga beddelo dhexroorrada iyo astaamaha baararka xoojinta.
• Kordhinta otomatiga ah ee loo xoojiyo baararka, oo ay ku jiraan cabirkooda iyo sharraxaaddooda (faahfaahinta xoojinta baararka).
• Awoodda gelinta isku-darka tirada iskudhiska xoojinta alwaaxyada iyo sharraxaadahooda qalooca oo leh kordhinta joogtada ah ee dhererka baararka, iyada oo xaddideysa tirada tirooyinka baararka ee gogosha.
• Gelitaanka bilaashka ah ee sharraxaadda xoojinta ee aragtida element iyo qaybaha iskutallaabta.
• Lambarrada isdaba-joogga ah ee dhammaan baararka kujira dukumiintiga ama shaybaaro.
• Awoodda si xor ah loogu daydo cabbirida joometeriyada slab.
• Abuuritaan otomaatig ah iyo wax ka badalista liistada birta xoojinta ee ku saleysan moodalka xoojinta ee la abuuray (liis garee hal alwaax ama liistada sawirka oo dhan).
Muuqaal hordhac ah oo ah qaabka loo abuuray xoojinta slab ee aragtida 3D.
[cinwaanka bogga soo socda = »Qalabka ArCADia»]
ArCADia BIM - Modules Qalabka
Waa maxay ArCADia-IFC?
BIM (naqshadaynta macluumaadka macluumaadka), taasi waa, qaabeynta dhismaha ujeeddooyinka leh, IFC waa mid ka mid ah qaabab inta badan la adeegsado. Faylasha qaabkani waa la dhoofiyay loona dhoofiyay barnaamijyada sida Revit, ArchiCAD, Dhismooyinka Tekla iyo Allplan, iyo kuwo kale. Mashaariicda lagu sameeyay nidaamka 'BIM' kaliya maahan dhismayaasha saddex-geesood leh ee leh qaab dhismeedka go'an, laakiin walxaha gudbiya macluumaadka ku saabsan dhismahooda, tusaale ahaan alaabada, oo ay kujiraan isuduwayaasha, qiyamka iyo xog dheeri ah oo lagu qori karo shay. ArCADia-IFC, qeybta cusub ee nidaamka ArCADia, waxay badashaa diiradda saarashada akhrinta faylalka IFC iyadoo la soo dejinayo iyaga oo aan wax beddelin. Tani waxay u oggolaaneysaa moodelka in lagu rakibo saxsanaanta weyn oo ay la socoto dhammaan xogta shey kasta ee abuuritaanka dhisme kasta. Walxaha looma beddelayo walxaha nidaamka sidaas darteedna dhammaan faylalka waa la xiraa iyada oo aan loo eegin qaabka qaab dhismeedka oo aan mar dambe u baahnayn in la barbar dhigo qaab dhismeedka jira ee nidaamka ArCADia. Tiro kasta oo faylasha IFC ah waxaa lagu ridi karaa ArCADia oo ay la jaan qaadi kartaa moodooyinka nidaamka mashruuca. Moodeellada waa kuwo madaxbanaan, hadana marka xogta wareejinta oo dhan la wareejiyo, waxay ku qasban yihiin xaqiijinta naqshad isku dhaca iyo helitaanka xulashooyinka, tusaale ahaan, isgoysyada u dhexeeya qaybaha dhismeyaasha iyo xarumaha kala duwan, iyadoo aan loo eegin in loo soo dhoweeyay tusaale ahaan IFC ama waxaa lagu abuuray xulashooyinka nidaamka ArCADia.
• Soo dejinta faylka IFC waxaa loo soo saaray inuu yahay tusaale keli kali u ah mashruuc kasta. Nooca cusub wuxuu kuu oggolaanayaa inaad soo dejiso feyl mashruuc kasta (mid cusub ama leh qaab dhismeedka jira ee nidaamka nidaamka ArCADia) oo aad ku rakibtid dhowr nooc IFC mashruuc. Moodeelka la soo dhoofiyo ayaa lagu ridi karaa iyadoo la adeegsanayo aragtida la fududeeyay ee saadaasha (oo ay la socoto oo keliya baqshadda shayga la muujiyay) ama dhammaan geesaha la arki karo.
• Maareynta moodooyinka IFC: ku daridda iyo ka saarista faylasha dibedda laga keenay.
• Suurtagalnimada in wax laga beddelo booska moodeelka oo ku yaal goobta mashruuca, suurtagalnimada dhaqdhaqaaqa gudaha X, iyo nidaamka Y heer ka sarreeya heerka badda.
• Gaaritaan deg deg ah, oo ku yaal daaqadda Guryaha, iyo dhammaan cabbiraadaha walxaha IFC ee lagu keydiyey barnaamijka Isha.
Wada noolaanshaha moodooyinka IFC iyo nidaamyada ArCADia hal mashruuc; Waa ku mahadsan tahay taas, shilalka u dhexeeya dhammaan ama walxaha la tilmaamay ee dhammaan moodooyinka jira ee mashruuca mar hore laga hubin karaa marxaladda naqshadaynta.
• Mashruuca badbaadinta hawsha iyada oo loo marayo xirmo mashruuc oo ay la socdaan dhammaan moodooyinka IFC ee kujira.
• OS: Windows 10 ama Windows 8 ama Windows 7 (Windows 10 64-bit ይመከራል)
[cinwaanka bogga soo socda = »ArCADia 3D Maker»]
Waa maxay ArCADia-3D MAKER?
ArCADia-3D Maker wuxuu ka badbaadiyaa mashruuc 3D nidaamka ArCADia BIM.
Barnaamijka ArCADia wuxuu leeyahay cutubyada soosocda:
• ArCADia-3D Maker, waxay leedahay ikhtiyaar badbaadin oo loogu talagalay mashruuc 3D ah.
• ArCADia-3D Viewer, kaasoo u oggolaanaya isticmaaleha inuu arko mashruuc 3D adigoon rakibin Arcadia.
Waxaa jira laba ikhtiyaar oo lagu keydin karo soo bandhigida mashruuca: oo leh ama aan lahayn ArCADia-3D Viewer browser. Biraawsarka, i.e. ArCADia-3D Viewer waxaa laga soo degsan karaa websaydhada oo si madaxbanaan loogu rakibi karaa barnaamijka ArCADia BIM.
[cinwaanka bogga soo socda = »ArCADia 3D Viewer»]
ArCADia-3D VIEWER [BILAASH]
Soo degso barnaamijka:
Waa maxay ArCADia-3D VIEWER?
ArCADia-3D Viewer waa codsi kali ah oo u oggolaanaya isticmaaleha inuu arko mashruuc 3D isla markaana leh 3D fuulitaan hareerahooda iyada oo aan loo baahnayn in lagu rakibo ArCADia. Si kastaba ha noqotee, Suuragal maahan in wax laga beddelo mashaariicda la arkay. Arcadia-3D Viewer sidoo kale waxaa lagu dari karaa soo bandhigid lagu keydiyay Arcadia-3D Maker waxaana lagu bilaabi karaa mashruuc lagu sameeyo nidaamka Arcadia BIM.
Astaamaha aasaasiga ah ee barnaamijka:
• Fur faylasha .A3D oo ay kujiraan soojeedin 3D ah,
• Markuu arko dhismaha oo leh qaabab la doortay ama midab lakab,
• Waxay u oggolaaneysaa dhaldhalaalka xariiqa xubno la xushay (koronto, bullaacad, gaas, iwm.) Inay mashruucan si cad u muujiso,
• Mashruucu waxaa lagu daawan karaa qaababka geedka: Xaaladda Cayrta, Xaaladda Duulista, iyo Gait Mode.
[cinwaanka bogga soo socda = »ArCADia Text»]
Waa maxay ArCADia-Text?
ArCADia-Text waa faylka cusub ee faylka loo yaqaan "RTF file" kaasoo lagu soo daray barnaamijka. Bog furaha ayaa si toos ah u furaya markii uu dhoofinayo fayl qaab RTF ah, wuxuu awood u leeyahay inuu wax ka beddelo liistada daabacaadda, daabacdo, soo galo sawirrada rasterka oo lagu keydiyo qaababka RFT, DOC, DOCX, PDF iyo TXT.
[cinwaanka bogga soo socda = »Maktabadaha 3D ee ArCADia]]
ArCADia BIM - Maktabada Element 3D
Waa maxay LACDADA?
LAYRUURKA ARCADia-GARDEN waa buugga liis-garaynta tayo sare leh ee nidaamka loo yaqaan 'ArCADia BIM', oo ku saleysan fikirka dhismayaasha Modeling Information (BIM). Maktabadda waxaa ku jira 400 walxood oo loogu talagalay jardiinooyinka gudaha, bannaanka iyo hareeraha dhismayaasha. Kuwaas waxaa ka mid ah, geedo iyo geedo, geedobo, deyrar, balliyaal iyo barkado balliyaal ah, teendhooyin, alaabada jardiinooyinka iyo waxyaabaha ka kooban garoonka yar-yar. Maktabaddu waxay waxtar u leedahay qaabeynta hareeraha mashruucyada dhismaha.
Barnaamijka R3D3-RAMA 3D waxaa loogu talagalay injineerada dhismaha. Waxaa loo adeegsadaa xisaabinta iyo qaabdhismeedka hababka loo yaqaan 'planar' iyo nidaamyada baloogyada wareega. Thanks to interface user raaxo leh oo cad, barnaamijka waxaa loo isticmaali karaa oo keliya ma aha naqshadeynta, laakiin sidoo kale ujeedo waxbarasho.
Xogta ayaa si xasaasi ah loogu dhex galay barnaamijka, joomatariiga nidaamka ayaa lagu qeexi karaa iyadoo la adeegsanayo jiirka oo keliya. Barnaamijku wuxuu la shaqeeyaa noocyada CAD-yada iyo nidaamka ArCADia-ARCHITECTURE. Soo-saareyaasha shaqo ee aasaasiga ah ayaa la heli karaa. Barnaamijku wuxuu kakoobanyahay maktabad lagu diiwan gashan yahay oo la diyaariyey, iyo shey la xoojiyay iyo waliba walxo alwaax ah. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa gelinta fudud ee aaladda qoryaha iyo qaababka baararka, labadaba nidaamyo yaryar oo faafaya dhowr baararka, iyo qaab-dhismeedka 3D ee waaweyn oo ay ku jiraan boqolaal baararka iyo qaniga. Sidaa daraadeed, waa suurtagal in la tiriyo nidaamyada dhismaha sida: heerar kala duwan iyo qaab-dhismeedyo fara badan, dhismeyaal dhismeyaal iyo dhismeyaal bulsheed, dhismayaal saqaf leh, qaab dhismeedka saqafka sare, mashiinnada baararka, iwm. Barnaamijku wuxuu u oggolaanayaa la shaqeynta qaababka cabbiraadda iyadoo loo eegayo Eurocode: EuroStal, EuroŻelbet iyo EuroStopa.
Tilmaamo (ikhtiyaari ah):
• Xisaabtanka adag ee loogu talagalay nidaamyada baararka qorsheysan iyo baloogyada xayawaanka oo leh dherer is bedbeddela oo wareegsan oo wareegsan oo baararka dhererkiisuna yahay.
• Suurtagalnimada qaabeynta garaafka iyo wax ka badalida xogta kaliya ee 2D diyaaradda shaashadda, oo ay kujirto suurtagalnimada wareejinta udhaxeysa diyaaradaha 3D ee khafiifka ah.
• Awoodda lagu keydiyo oo loo aqriyo joomatikada dhameystiran ee nidaamyada static (planar iyo spatial) oo loo adeegsado faylalka DXF iyo ka shaqeynta raad raac ku saleysan faylka DXF.
• Shaqada akhriska iyo ka shaqeynta raadinta faylka DXF.
• Shaqaynta in loo beddelo baararka nidaamka loo beddelo raad.
• Suurtagalnimada akhrinta calaamadaha saqafka ee nidaamka ArCADia iyo jiilka otomatiga ah ee qaabdhismeedka saqafka saqafka.
• Suurtagalnimada qeexitaanka saxda ah ee iskuduwaha keyboard qaraabada ah ee nidaamka Cartesian iyo polar system.
• Awoodda lagu daro qalabka sawirada lagu muujiyey ee ku xigta xagga tilmaameedka ee naqshadeynta garaafyada.
• Awooda aad iskaga badasho inta udhaxeysa aragtida iyo saadaasha orthogonal.
• Isticmaalka zoonka iyo digsiga nidaamka iyo sidoo kale wareeggiisa bilaashka ah waqtiga dhabta ah.
• Suurtagalnimada qaababka qalooca loo adeegsado iyada oo la adeegsanayo dariiqyo leh qaabab wareega ama wareega wareega.
• Habka raadraaca horumarsan marka la soo bandhigayo xubno cusub oo ka tirsan nidaamka.
Qalabka waxaa lagu qaabeeyaa codsiyada CAD iyadoo la hagaajinayo noodhadhka jira, barta dhexe ee baararka, baloogyada iyo meelaha u dhow baararka, meelaha isgoysyada ee baararka, dhibcaha culeyska, iyo dhibcaha xargaha la qeexay, oo ay ku jiraan xubnaha raadraaca.
• Suurtagalnimada in lagu daro xubno ka mid ah habka 'cusub ee' 'Ortho' ee mid ka mid ah diyaaradaha waaweyn, iyo sidoo kale qaabka xaaladda.
• Suurtagalnimada in lagu hawlgaliyo muuqaalka 2D ee barta la galiyay ee habka galinta ee xubnaha dabaqa iyo alaabada.
• Awoodda aad u leedahay inaad qufuldid muuqaalka shaxanka ee nidaam kaste oo dib loo habeeyay.
• Suurtagalnimada in wax laga beddelo buundooyinka, taageerooyinka, baararka iyo xamuulka kooxaha.
• Awooda dib-u-habeynta waxyaabaha xubnaha nidaamka heerka geedka mashruuca.
• Qalabka xogta wax ku qorista ee barnaamijka CAD ee ku saleysan qoritaanka sida: koobiyeynta, koobiga badan ee jihada vector qeexan (leh ama aan lahayn hagaajin ama aan lahayn cabir), magdhow, dhaqdhaqaaq, dherer, ka saarida baararka iyo qeybaha , wareejin, mirroring, isugeynta sanka, dib u hagaajinta iyo soo celinta isbeddelada.
• Suurtagalnimada adkeynta koox kasta oo baararka ku jirta dhidibka, iyo sidoo kale baararka iyo taageerooyinka.
• Suurtagalnimada in baararka kooxaynta iyo si fudud loo doorto kooxaha baararka.
• Suurtagalnimada xulashada baararka diyaaradda.
• Suurtagalnimada in loo qaybiyo baararka u dhexeeya qanjidhada qaybaha oo loo sii wado hawshiisa.
• Suurtagalnimada in la midoobo baararka is-biirsada oo xaddididda xamuulkooda.
• Suurtagalnimada in lagu koobiyeysto qayb ka mid ah ama nidaam dhammaystiran iyada oo loo adeegsanayo shaashadda u dhexeeya naqshadaha kala duwan iyo hal naqshad gudaheed.
• Awooda aad iskugu habeyn karto, isku beddeli karto oo aad ku beddeli lahayd cinwaanka nidaamka deegaanka ee baarka.
• Adeegsiga waxqabadka si loo cabbiro dhererka iyo xagasha u dhexeysa laba baararka nidaamka qaab qaabeyn ah.
• Maareeyaha astaan-qaadaha ee ay ka mid yihiin maktabad bir, bir la taaban karo oo profiles alwaax ah, iyo sidoo kale suurtagalnimada in maktabadda lagu ballaariyo astaan ​​isticmaale iyo gelitaanka astaamaha qaab qaas ah.
• Awooda lagu abuuro qeybaha iskutallaab ee qaab kasta, gooya cutub iskutallaab ah oo fudud, koobi ah, wareejin karo oo dhaqaajin kara qaybaha iskutallaabta adag.
• Suurtagalnimada in si otomaatig loogu toosiyo dariiqyada ugu waaweyn nidaamka maxalliga ah.
• Awoodda akhriska joomatarika qeybta isugeynta ee baararka faylka DXF.
• Xisaabinta otomatiga ah ee dhammaan sifooyinka suuragalka ah ee qaybta isgoyska ee nidaamka maxalliga ah iyo tan ugu weyn, oo ay kujirto go'aaminta xudunta qaybta isugeynta.
• Suurtagalnimada qeexidda iyo xisaabinta baararka joomatari-ga beddelka ah.
Go'aaminta daqiiqada taagan ee qayb kasta oo ah maqnaanshaha qayb ka mid ah iskutallaabta ee nidaamka ugu hooseeya.
• Laybareeriyada walxaha horay loo sharxay oo ku jira feylasha XML, oo ​​ay ku jiraan: bir, alwaax adag iyo kareemka xajmiga leh, aluminium, shub Waxaa sidoo kale jira suurtogalnimada keydinta iyo tafatirka agabka isticmaalaha.
• Suurtagalnimada abuuritaanka nidaamyo isku-dhafan marka la eego agabka.
• Xamuul: xoogag urursan, daqiiqado culeys badan, culeysyo joogto ah, daqiiqado isdaba joog ah, kuleylka kuleylka, kala duwanaanta heerkulka, xoogagga udhexeeya, dejinta taageerada, wareejinta taageerada.
• Xirmooyin ayaa loo dejiyay kooxo isku-dheellitiran oo joogto ah oo is beddelaya (hal iyo dhowr xamuul ah), oo ay kujirto suurtagalnimada qeexidda isku-duwaha rarka.
• Awoodda loo dejiyo kooxaha culeyska shaqsi ahaaneed mid firfircoon ama aan firfircooneyn (looma tixgalin inta lagu jiro xisaabinta), muuqda iyo wax aan muuqan karin.
• Suurtagalnimada in wax laga beddelo culeysyada baararka iyo noodhyada koox ahaan.
• Suurtagalnimada dejinta iyo tafatirka labbiska iyo culeyska dusha sare iyo sidoo kale qeybinta xamuulka dusha sare ee xamuulka basaska iyo sanka xamuulka.
• Aqoonsiga xamuulka nuqul, oo ay kujirto suurtagalnimada in meesha laga saaro ama la midoobo nuqullada.
• Suurtagalnimada qaabaynta, xisaabinta iyo muujinta natiijooyinka kooxaha cayiman ee xamuulka mobilada.
• Awooda qeexida cilaaqaadka ka dhexeeya kooxaha culeyska loo isticmaalay in lagu dhiso xirmo, oo ay kujirto xaqiijinta otomaatiga ah ee saxan.
• Suurtagalnimada sameynta isku darka isticmaaleyaasha dheeraadka ah.
• Suurtagalnimada karti-darida iyo curyaaminta waxqabadka isugeynta la qeexay.
• Awoodda abuurista iyo keydinta aragtida isticmaale ee nidaamka qaab ahaan.
• Suurtagalnimada gelinta cabirrada qaabeynta: vertical, taagan iyo isbarbar dhig.
• Tixgelin toos ah oo miisaan gaar ah.
• Noocyo noocyo taageero ah oo dhammeystiran, oo ay ku jiraan suurtagalnimada qeexitaanka bayaannimadooda.
• Soo saareyaasha qaabdhismeedka xuduudaha: xirmooyin laba geesood leh oo dhinacyadoodu kala duwan yihiin, alwaaxyo (isbarbardhig iyo wareeg), saddex geesood oo laba geesood ah, alwaax saqafyo alwaax ah, munaarado saqafka leh iyo jaakadaha dharka.
• Awoodda qeexida baararka nooca fiilada leh iyo qabashada xisaabinta qaababka ay ku jiraan fiilooyin loogu talagalay kooxaha culeyska shaqsiyeed iyo isu-darka qeexan.
• Suurtagalnimada abuuritaanka baararka ku jira nidaamka nidaamka (hal ama laba-dhinac ah) oo leh baloog bar-bar socda oo is barbar socda.
• Awoodda lagu xusho kooxo baararka, walxaha cabbirka iyo culayska si toos ah heerka geedka mashruuca.
• Awoodda shaandhaynta iyo xulashada noocyada shey mashruuc shaqsiyeed, marka la qiyaaso shaandhada shaandhaynta.
• Awoodda nadiifinta iyo xaqiijinta nashqad naqshad sameysan.
• Natiijooyinka kooxaha culeyska shaqsiyeed, isku-darka koox kasta oo rar ah iyo isku-darka la qeexay, iyo baqshadda ayaa si toos ah loogu xisaabiyaa barnaamijka.
• Shaqo lagu keydiyo natiijooyinka xisaabinta ugu dambeysay iyo cabbirka isugeynta nidaamka.
• Suurtagalnimada in la sameeyo xisaabinta tirakoobka iyadoo la raacayo aragtida amarka labaad.
• Suurtagalnimada aragtida tilmaamaha iyo qiimayaasha falcelinta taageerada.
• Kala saar xeerar qeexaya qeexitaanka kooxaha iyo isdhaxgalka, iyo dhismaha otomatiga ah ee iskudhafka xisaabinta tirooyinka iyadoo la raacayo PN-EN Eurocodes.
D Go'aaminta baqshad dhameystiran ee voltageska caadiga ah iyo xisaabinta voltageska caadiga ah ee kooxaha shaqsiyaadka iyo wadarta culeyska, isku-darka iyo kooxaha baqshada.
• Suurtagalnimada in la soo bandhigo jaantus astaamo leh oo aasaaska u ah dhamaadka xirmada.
Eter Go'aaminta qalooca caadiga ah, xagjirka iyo dhimista qalooca walaaca dhibic kasta oo ka mid ah isgoysyada barta.
• Goobta culeyska ugu yarayn ee dhimista qaybta iskutallaabta baar.
• Muuqaal deg deg ah qaab dhismeedka aragtida 3D ee u oggolaaneysa xulashada baararka leh walaaca caadiga ah ee la ogolaan karo.
• Suurtagalnimada in lagu muujiyo natiijooyinka xoogagga gudaha, fal-celinta, qaab-dhismeedka iyo culeyska caadiga ah ee shaashadda kormeerka (nidaamka oo dhan iyo hal baar).
• Shaqada si loo muujiyo loona qariyo qiimayaasha ciidamada gudaha, culeyska iyo barakaca jaantusyada adduunka, shaashadaha garaafka ah ee qiyamka xad dhaafka ah iyo qodobbada adeegsadaha lagu xushay tab natiijooyinka.
• Hawsha lagu abuurayo warbixin RTF oo ka socota shaashadda shaxanka ee nidaamka, oo ay ku jiraan jaantusyada ciidamada gudaha, culeyska iyo barakaca ama cabbirka guud, natiijooyinka natiijooyinka iyo cabbirka tabinta.
• Suurtagalnimada in lagu qariyo qayb ka mid ah qaabeynta qaabeynta nuqulka xogta iyo natiijooyinka aragtida muuqaalka.
• Muuqashada muuqaalka isbedelka nidaamka iyadoo loo adeegsanayo animation waqtiga dhabta ah.
• Abuurista warbixinno kala duwan oo ay kujiraan natiijooyin taban iyo muuqaal ahaan qaab RTF ah.
• Suurtagalnimada in la aasaaso nooc kasta oo nooc ka mid ah warbixinta (ilaha, galka, iwm.).
Ka soo bixi warbixinnada.
• Siyaabo fara badan oo suurtagal ah oo wax looga beddelayo is-dhexgalka, barnaamijka iyo dejinta mashruuca, iyo sidoo kale soo bandhigidda xogta iyo natiijooyinka.
• Awoodda beddelka nooca barnaamijka ee barnaamijka (Polish, Ingiriis, Jarmal) inta barnaamijka lagu gudajiro.
Ku habeynta xisaabinta static ee cabirka cabirka birta, alwaaxa iyo dhismayaasha la taaban karo ee la xoojiyay.
• Suurtagalnimada in la abuuro kooxo taageerooyin ah iyo sare u qaadidda cabbirka saldhigga.
Iskaashi laba geesood ah oo lala yeelanayo qaababka cabbirka EuroStal, EuroŻelbet, EuroStopa, EuroDrewno.
Go'aaminta xirmada leexashada qaraabada ee cabbiridda shaqsiga iyo wadajirka.
• Suurtagalnimada cabbirista wadareed ee otomaatiga ah ee nidaamka dheellitirka oo dhan oo ku saleysan cabirrada noocyada ee loo xilsaarey kooxaha basaska iyo qaybaha cabirkooda qeexan.
• Hawsha si loo hubiyo cusbooneysiinta barnaamijyada cusub.
[cinwaanka bogga soo socda = »ArCADia EuroStal»]
Qalabka lagu cabbiro waxyaabaha aasaasiga ah ee birta sida waafaqsan heerarka: PN-EN 1993-1-1 Eurocode 3: Juun 2006. Barnaamijku wuxuu hubiyaa awoodda culeyska ee noocyada soo socda ee qaybaha isgoysyada bar:
• Qeybaha I-duudduuban,
• qaybo badh ka kooban oo waan duubay,
• Qaybaha T-ka duuban,
• qaybaha C-laxdiid,
• isla'eg iyo isle'eg xagal duuban oo isle'eg,
• tuubbooyin duuban, labajibbaarane iyo tuubooyin wareegsan,
• Qaybo walxood oo mon -ymmetric I-welded ah,
• qaybaha T-qaybaha walxaha aan la jaanqaadi karin,
• qaybaha welded ee sanduuqa (mono-summetikal),
• tuubbooyinka alwaax ahaan, labajibbaarane ah iyo tuubooyin wareegsan oo qabow.
Iyada oo la raacayo qawaaniinta ku jira heerarka PN-EN 1993-1-1, barnaamijka cabirista wuxuu xaqiijinayaa culeyska qaybaha iskutallaabta canaasiirta, iyadoo la tixgelinayo xasilloonida maxalliga ah ee qaybta iskutallaabta isla markaana u oggolaaneysa xasilloonida guud ee shey.
Iyada oo qayb ka ah xaqiijinta culayska qaybta iskutallaabta, waxa soo socda ayaa la cayimay:
Awooda culeyska saareed,
Awooda culeyska cadaadiska,
• yareynta awooda culeyska,
Awoodda qalooca iyo fogeynta,
Awoodda qaloocinta leexashada xoogga dhererka,
• xambaaridda awoodda foorarsiga iyo gadhka xoogga dheer.
Marka la xaqiijinayo xasilloonida guud ee shayga, waxyaabaha soo socda ayaa lagu qeexaa:
Awooda culeyska culeyska u leh cunsur isku buuqsan,
• dusha sare ee guntinta dambe ee xambaarta awoodda walxaha foorarsan,
Awooda isudhexgalka kartida leh ee foorarsiga iyo walxaha isku buuqsan.
Muuqaalka cabbirka EuroStopa waxaa loo sameeyay in lagu qaabeeyo aasaaska dusha sare sida ku xusan PN-EN 1997-1 Eurocode 7 ee barnaamijka 3D R3D3-RAMA oo hoos imanaya xaalad adag oo dacwad ah. Waxaa loo soo saaray qaab rakibaal lagu daray barnaamijka 3D R3D3-RAMA ee loogu talagalay xisaabinta static, kaas oo u baahan ruqsad gooni ah. Waqtigaan, R3D3-RAMA 3D iyo EuroStopa waxay ku shaqeyn karaan labo qaab:
Dhinac ahaan, barnaamij loogu talagalay xisaabinta 'static static' kaliya (barnaamijka EuroStopa wuxuu kaliya ka shaqeeyaa nooca demo) shatiga R3D3-RAMA 3D ayaa tan looga baahan yahay.
• Ku xirnaanshaha barnaamijka 'EuroStopa', barnaamij ahaan loogu talagalay xisaabinta static-ka iyo cabirka ballaca salka ku haya saldhigga, shati ayaa looga baahan yahay R3D3-RAMA 3D iyo EuroStopa.
Barnaamij loogu talagalay tafatirka iyo daawashada feylasha warbixinta (qaab RTF) sida MS Word (2003 iyo wixii ka sareeya) ama aragtida MS Word waa in lagu dhejiyaa nidaamka loogu talagalay hawlgalka saxda ah ee dhammaystiran ee barnaamijka 'EuroStopa'.
Guud ahaan, barnaamijku wuxuu fulin karaa xisaabinta iyo xaqiijinta soo socota:
• Xaqiijinta awoodda carrada ee jihada labada dhinacba, heerka aasaaska iyo dusha sare ee lakab kasta oo carrada ah dhamaan duruufaha kuyaala marka loo eego heerka PN-EN 1997-1 Eurocode 7.
• Xaqiijinta heerka caadiga ah ee laxiriira cabirka ilbaxnimada.
• Cabbirka dhismeedka aasaasiga ah ee rogrogida ee ay sababaan cadaadiska ciida, oo loo xisaabiyo culeyska ba'an ee jihada X iyo Y (ACC. PN-EN 1992-1-1 Eurocode 2), oo ay kujirto xaqiijinta xaaladaha dhismaha loogu talagalay xoojinta ugu yar iyo xulashada saxda ah ee baararka.
• Caabinta isbadalku waxaa loo xaqiijiyaa xaaladaha isku xiga ee culeyska.
• Caabbinta qodista waxaa lagu hubiyaa qaybaha iskutallaabta ee sifaha ah.
• Xisaabinta macnaha isuduwaha aasaasiga iyo kan sare ee dhisme aasaasiga ah ee lakab hoosaad dhammaan xaalladaha culeyska iyadoo la isticmaalayo habka walaaca (la jaan qaada Eurocode).
• Cabbiraadda xoojinta toosan iyo jiifa waxaa loo fuliyaa taageerada nooca gambaleelka, oo ay ku jiraan xulashada habboon ee baararka.
Marka lagu daro tirokoobyo balaaran oo xisaab ah, qeybtu waxay bixisaa astaamaha soo socda:
• Waxay ku darsataa heerka biyaha dhulka ku jira.
• Waxay u oggolaaneysaa tixgelinta tirakoobka dheeriga ah, marka fal-celinta ay ku yaalliin aasaaska.
• Waxay u oggolaaneysaa xisaabinta jawaab celinta toosan ee taageerada (Isku-duwaha Winkler).
• Waa ergonomic waana sahlan tahay in la isticmaalo.
Muuqaalka cabbirka EuroŻelbet waxaa loogu talagalay cabbiraadda qaabdhismeedka alwaaxyada la taaban karo iyo kuwa dhulka hoostiisa ah iyadoo la raacayo barnaamijka PN-EN 1992-1-1 Eurocode 2: Sebtember 2008 heerka barnaamijka 3D R3D3-RAMA ee diyaaradda iyo ka hooseeya xaalad adag oo xukun. Module waxaa loo soo saaray qaab rakibaal lagu daray barnaamijka 3D R3D3-RAMA ee loogu talagalay xisaabinta static, kaas oo u baahan ruqsad gooni ah.
Iyada oo qayb ka ah xaqiijinta finalka iyo xadka adeegga, barnaamijka wuxuu fuliyaa xisaabinta soo socota:
• Xisaabinta aagga xoojinta asaasiga ah ee foorarsiga isugeynta, isku buuqidda cirka isku buuqsan, kacsanaanta iswada iyo tolitaanka, oo ay ku jiraan dillaacyada ugu sarreeya ee dillaaca.
• Xisaabinta xoojinta transversal (riixyada) ee garka iyo tolashada bidaarta.
• Xisaabinta kala-goosashada bidaarta ka jirta gobolka jabka.
Noocyada soosocda qaybaha iskutallaabtu waxaa lagu cabiray barnaamijka: wareeg, wareegsan, xagal, Qeybta T, Qaybta I, Qaybta C iyo qaybta Z.
• Adeeggu wuxuu abuuri karaa qeexitaan kasta oo nooc cabbir ah (daboolaya qaabeynta aasaasiga ah ee cabbirrada xoojinta), kaas oo loo adeegsan karo naqshad kasta.
• Nooc ballaaran oo noocyo xoojin ah oo asaasi ah oo laga soo xulan karo: fiicnayn, labis, sumad ahaan, oo loo qaybiyay laba saf, oo xadidan oo keliya qaybta ugu weyn qaybta isugeynta.
• Isku-habeynta otomatiga ah ee daboolka xoojinta iyadoo lagu saleynayo heerka soo-gaadhista.
• U qeybinta walxaha la taaban karo ee la xoojiyay oo loo kala qaybiyay tiro sooneyaal ah oo isla xoojinta loogu talagalay xoojinta aasaasiga iyo kan transverse.
• Tixgalinta shuruudaha aasaasiga ee qaab dhismeedka xoojinta qeybaha.
• Xulashada otomaatiga ah ee aagyo xoojinta xiirid.
• Xaqiijinta otomatiga ah ee baqshadda xoogga dibedda dhammaan dhibcaha astaamaha ee sheyga la soo koobay.
• Warbixin cabbiraadda oo ah qaab xisaabinta buugga oo ay kujiraan dhammaan natiijooyinka dhexdhexaadka ah ee qaabka RTF (MS Word).
[cinwaanka bogga soo socda = »ArCADia EuroDrewno»]
Waa maxay EuroDrewno 3D?
Mowjadda waxaa loo isticmaali karaa in lagu cabbiro diyaaradda iyo qaab-dhismeedka xayawaanka ee alwaaxyada oo leh qeybaha iskutallaabta ah ee alwaaxa adag iyo xarkaha loo yaqaan 'PN-EN 1995-1-1 standard' sida 2010 ee xaalad cadaadis ku-meel-gaar ah iyo qaadashada tirin daqiiqada torsional.
• Adeeggu wuxuu abuuri karaa nooc kasta oo ka mid ah qeexinta cabbirka (isku xirnaanta dusha sare, dhibcaha isugeynta daciifka ah, leexashada la oggol yahay iyo cabbirrada kale), oo loo isticmaali karo nashqadeyn kasta.
• Isku-darka wax-ka-beddelka 'kmod' waxaa si otomaatig ah loo qaadanayaa iyadoo lagu saleynayo koox culeys ah oo leh waqtiga ugu yar ee saamaynta ku leh dhismaha marka la isku daro, ama gacanta ku saleysan go'aannada isticmaalaha.
• Suurtagalnimada cabiridda baararka shaqsiyadeed, koox biraha qarka u saaran iyo baararka u dhexeeya isku dhaca (oo leh kala-bedelka xagal ka yar 5 digrii).
• Xaqiijinta otomatiga ah baqshadda ciidamada gudaha dhammaan meelaha lagu yaqaan ee astaamaha lagu cabbiray.
• Walbahaarka caadiga ah iyo xarkaha waxaa lagu hubiyaa qaybta iskutallaabta.
• Cabbirka goob kasta oo la tilmaamay oo ka mid ah shey waa la xaqiijin karaa dhammaan baqshada iyo hal baqshad la soo xulay.
• Barnaamijku wuxuu go’aaminayaa inta ugu badan ee leexinta iyo qaxitaanka sheyga ee xaalada walaaca, oo ay kujirto u ogolaanshaha saameynta cufnaanta iyo isqabqabsiga ciidamada xiirid iyo sidoo kale isbarbardhiga qiimayaasha la oggol yahay.
• Cabiraada warbixin qaab xisaabeed gacanta ah oo ay kujiraan dhamaan natiijooyinka dhexdhexaadka ah ee qaabka RTF (MS Word).
[cinwaanka bogga soo socda = »InterSoft IntelliCAD»]
Waa maxay INTERsoft-INTELLICAD?
INTERsoft-INTELLICAD waa nooc cusub oo software CAD ah oo loogu talagalay abuurista 2D iyo dukumiintiyada 3D farsamada, kuwaas oo jiray sanado. Waxay leedahay qalab awood badan oo sameynta sawir sax ah. Muuqaalka muuqaalka cusub ee garaafka ahi wuxuu dammaanad qaadayaa shaqooyin caqli gal ah isla markaana uusan faragalin ku sameynaynin qaabeeyaha naqshadaha CAD. Software-ka wuxuu leeyahay howlo badan oo kaladuwan oo loogu tala galay keydinta iyo rakibida faylasha DWG, laga soo bilaabo qaabkii hore ee hore ee 2,5 illaa qaabkii ugu dambeeyay ee DWG 2013. INTERsoft-INTELLICAD waxay la shaqeysaa qalab fara badan, sida: StalCAD, ŻelbetCAD, InstalCAD, INTERsoft- PRZEDMIAR, ooy kujiraan nidaamyada nidaamka 'ArCADia modules' ee loogu talagalay abuurista qaab BIM oo dhammaystiran.
Ku shaqeynta lakabyada, xariiqda taliska, u diyaarin dhammaystiran ee qaabeynta (amarada, baararka qalab, gaagaleyaasha iyo magacyadooda), ikhtiyaarka loo soo dejiyo khadadka, garka iyo qaababka cabbirka ayaa ah astaamaha aasaasiga ah ee softiweeraha. Intaa waxaa sii dheer, waxay u oggolaaneysaa horumarinta iyo wax ka badalida dukumiintiyada 2D iyo 3D, rarida rasta aasaaska (BMP, JPG, TIF iyo PNG), sharraxaadda aaladda 'TrueType' ama 'SHX fonts', xariiq toosan iyo cabbir qaan-goosasho leh qaabka duubista, keydinta iyo maaraynta xallinta adkaha ( sidoo kale astaamo), rakibidda codsiyada lagu keydiyay LISP iyo SDS. Waxaa jira ikhtiyaar ah inaad ku shaqeysid dallacyada, iftiinka iyo gudbinta waraaqaha 3D.
SAACADAHA INTA SOO SAAR-INTELLICAD SOFTWARE
Waxaan xubin ka nahay barnaamijka 'IntelliCAD Technology Consortium (ITC) ilaa 2002. Kaqeybgalayaasha maalgashigan maalgashi ee aan macaash doonka aheyn ayaa kormeeraya horumarinta barnaamijka' CAD ', kaas oo ahaa bedelka koowaad ee dhabta ah ee barnaamijka' AutoCAD '. Kaliya waxaan horumarinaa oo wadaageynaa xalalka IT, ee lagu hirgaliyo koodhka isha guud.
Shirkadaha badankood, oo ay kujiraan kuwayaga, waxay u adeegsadaan aalad ahaan mashiinka sawirka sawirka barnaamijyadooda gaarka ah. Badeecadeenna calanka, Nidaamka isku xidhka labada qaybood ee ArCADia BIM wuxuu sidoo kale adeegsadaa xalalka IntelliCAD.
Horumarka ku saleysan tikniyoolajiyadda BIM waa, shaki la'aan, mustaqbalka lama huraanka ah ee warshadaha dhismaha, si kastaba ha noqotee, sida aan soo aragnay, baahida loo qabo in la isticmaalo aaladda fudud ee CAD oo caalami ah had iyo jeer waa la joogaa. Anagoo isku dayeyna inaan qancinno baahidaas, waxaan soo saarnay barnaamijka INTELLICAD. Annaga oo ah soo-saare software ah, ma qaabayn karno kaliya dalabkaas laakiin waxaan sidoo kale goyn karnaa qiimaha ay leedahay, sidaa darteed, gaar ahaan injineerada Poland, waxaan awoodnay inaan dejinno shuruudaha wax iibsiga ee habboon.
Markii aad iibsanayso xalkaan, waxaad u furaysaa wadada naftaada mid si sahlan ugu gudbi kara adduunka tikniyoolajiyadda BIM, markaad u aragto inay ku habboon tahay. ”
Madaxweynaha INTERsoft & ArCADiasoft
Astaamaha CADARADA INTERsoft-INTELLICAD:
• Abuuritaanka sawirrada 2D iyo 3D adoo sawiraya oo gabi ahaanba wax ka beddelaya dhammaan walxaha.
• Awoodda akhrida ACIS adag (oo aan lahayn awood u lahaanshaha abuurista iyo tafatirka gabi ahaanba).
• ikhtiyaarka soo bandhiga sawirka iyo dib u soo celinta xulashada cusub ee multiline sawir.
• Akhriska iyo tafatirka sawirada bitmap (tusaale asalka geodetic) sida: JPG, TIF, BMP, GIF iyo PNG files.
• Galiin iyo qeexida maktabadaha calaamadaha, baloogyada, qoraalada fudud iyo kuwa cakiran (SHX iyo Noocyada Xaqiiqda Nooca ah).
• U-cabiridda loo qoondeeyay walxaha: xariiqda iyo xagasha, suurtagalnimada abuurista qaabab adeegsade.
• Joogto u daabicid adoo qeexaya dhammaan cabbirada daabacaadda.
• Cabbirka otomaatiga ee masaafooyinka, aagagga iyo isku dubbarididda isku-hagaajinta.
Dhoofinta faylasha PDF.
Dhoofinta faylasha STL.
• Noocyo badan oo kala jajabinta ah.
• Helitaanka tooska ah ee loogu talagalay caawimaada barnaamijyada ee ka imanaya barnaamijka kaalmaynta.
• Ku hel si toos ah buugga isticmaalaha ee ka imanaya tusmada gargaarka.
• Ku habboonaanta qaababka muuqaalka.
• Qaabab cabirro ballaaran.
• Booska warqaddu waxay maamushaa aragtiyada aan labajibaaraneyn
• Awooda lagu muujiyo qaababka daabacan booska warqad.
• Taageeridda cabbiridda isugeynta.
• Ku habboonaanta dariiqyada qaraabada ee sawirrada iyo xiriiriyeyaasha dibedda ah.
• Hagaajinta maaraynta baloogyada, aragtida, cabirrada iyo qaababka qoraalka.
• Daaqado badan ayaa lagu furi karaa aragtiyo kala duwan iyo qaabeyn.
• INTERsoft-INTELLICAD waxay qabataa qaabka DWG iyadoon la sameynin wax beddelaad ah oo ku saabsan sawirada lagu soo saaray AutoCAD oo la aqriyo oo la keydiyo iyada oo aan wax qallooc ah laga muujin.
• Akhriska iyo keydinta qorshayaasha qaab AutoCAD laga soo qaatay noocyada 2,5 illaa 2013.
• Sawiridda khadadka qarsoon iyo qaabka ruxitaanka waqtiga dhabta ah.
• Soo bandhigidda shaashadda leh darajooyinka.
• Muuqaalo aan labajibbaaranayn
• Jooji wakiilka iyo xiriiriyeyaasha banaanka ah.
• Ku soo bandhigida walxaha ADT iyo Civil 3D.
• Taageerida qaabab DWF iyo DGN.
Tilmaamo loogu talagay:
• Grid, howlaha sawirrada orthogonal, raadinta polar.
• Aqoonsi la wanaajiyey ee dhibco ku habboon (saldhiga), tusaale ahaan khadadka dhexe, isugeynta iyo dhibcaha xariiqda isgoyska.
• Hubi oo hagaaji shaqada masawirka musuqmaasuq.
• Duulista mashaariicda, aragtidiisa ayaa suurtagal ah iyadoo sababtu tahay dhammaan qaababka zoom, dib-u-cusboonaysiinta iyo qulqulka diyaaradaha, iyo sidoo kale wareegga firfircoon ee walxaha 3D.
• Khadadka taliska iyo fulintooda, u hoggaansanaanta buuxda ee qaababka faylka (DWG, DWF, DWT iyo DXF).
• Ku shaqeynta lakabyo.
• Cinwaannada, astaamaha, dillaacidda.
• Gudida Guryaha La Istaagay ..
XIDHIIDHKA BARNAAMIJKA dhameystiran:
• Wax ka beddelka menu-ka ugu sarreeya, baararka qalabka, bar-tilmaameedka amarrada iyo jid-galeyaasha.
• Qaabeynta shaashadda shaqada: midabka iyo cabirka xarigga goynta, iwm.
• LISP turjumaanka barnaamijyada luuqadda ayaa la hirgaliyay waxayna u oggolaaneysaa akhriska codsiyada ku qoran luqadan.
• Hawlaha dheeriga ah ee barnaamijka waa la ballaarin karaa iyadoo la akhristo tabinta SDS.
• Taageero menus hoos-u-dejinta amarrada dib u dejinta ah iyo soo-muujinta icon.
• Gudida Guryaha La-gooyay.
• INTERsoft -INTELLICAD Explorer waxay bixisaa astaamo 24-bit ah, taageero ah lakabyada iyo xulashooyinka badan, astaamaha liistada iyo fudeynta hawlgalka.
• Taageeridda xulashada aaladda si toos ah uga timid heerka loo yaqaan 'bar bar'.
• ArCADiasoft wuxuu xubin ka yahay ITC. Qaar ka mid ah koodhyada isha 'IntelliCAD 8' ayaa loo adeegsaday barnaamijka.
[cinwaanka bogga soo socda = »ArCon Garden»]
Maktabadaha EleCon - Maktabadaha Elementary
Maktabadda alaabada 3D ArCon-Garden
Arcon Garden 3D waa maktabad 600 oo shey loo isticmaalay hagaajinta jawiga dhismaha. Waxay ka kooban tahay qaybo ka mid ah qaab dhismeedka jardiinada (guryaha xagaaga, albaabada, buundooyinka, caqabadaha, dhismeyaasha qorraxda), nalalka, alaabada, alaabta guriga, dhirta iyo dhir, iyo sidoo kale gawaarida.
Maktabadda alaabada 3D ee ArCon-City
Maktabadda Magaalada ArCon waa aalad kale oo taageerta qaabeynta barnaamijyada Arcon. Waxay ka kooban tahay in kabadan 300 walxood oo laxiriira qorshaynta magaalada, iyo kuwa kale: baabuurta, calaamadaha taraafikada, joogsiyada gaadiidka dadweynaha, waababka taleefanka, tiirarka goldaloolooyinka, iwm. taas, marka lagu daro muuqaal macquul ah oo dhismaha laftiisa ah, u oggolaanaya in lagu soo ururiyo goob dhab ah. Adigoo adeegsanaya walxaha, waxaad diyaarin kartaa jawiga tooska ah ama naqshadeyn kartaa qolka oo dhan.
[cinwaanka bogga xiga = »Arcon Interiors»]
Maktabadda alaabada 3D ArCon-Interiors
Maktabadda 'ArCon Interiors Library' waxaa ku jira in ka badan 700 oo shey, oo ay ka mid yihiin, waxyaabo gudaha ah oo ay ka mid yihiin: alaabta guriga, qalabka jikada iyo waxyaabaha lagu daro, tubooyinka musqusha, saadka xafiiska cusub, kormeerayaasha LCD, kormeerayaasha cusub, iwm.
Maktabadda alaabada 3D ArCon-Schenker
Planet Gudaha 3D ee shirkadda Schenker waxay ballaarineysaa maktabadaha Arcon iyagoo ku dara 800 waxyaabood oo cusub Alaabtu waxay u qaybsan yihiin 13 qaybood (buuggyayaal) loogu talagalay qabanqaabada gudaha iyo deegaanka dhismaha. Waxyaabaha ugu xiisaha badan waa buugaagta musqusha iyo jikada.
Post Previous«Previous Dhammaan wararka ka imanaya QGIS
Post Next EOS waxay kuu oggolaaneysaa inaad fuliso hawlaha sawir-qaadidda ee shabakadaNext »